That's so good, right?: February 2011
အမေတို့များအတော်ခက်တယ် အားအားရှိ မိဘတွေနေတဲ့ တိုင်းပြည်ကိုပြန်လာပါ မိဘလက်ငုတ်လက်ရင်းအလုပ်ကိုပဲဦးဆောင်ပြီး မရှိ အတူရှိအတူနေသွားကြတာပေါ့တဲ့။ ကိုယ့်သားလေး သူတစ်ပါးနိုင်ငံမှာ အေးအေးသက်သာနေထိုင်နေတာကို သဘောမကျဘူးလားမသိ။ ငယ်ငယ်လေးကတည်းက ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာ ကိုယ်နေချင်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာနေခွင့်ရအောင် အမြဲကြိုးစားနေထိုင်တတ်တဲ့ ကျွန်တော့် အကျင့်ကို အဖေလည်းသိနေသား။ ဒီမှာ လိုက်နေပါဆိုတော့လည်း မဟုတ်ပြန်ဘူး။ ဟူး...ရာသီဥတုကလည်း အေးလိုက်တာ ကားမောင်း နေရတဲ့ လက်တောင်ထုံနေပြီ။ ပြီးမှပဲ ဖုန်းပြန်ဆက်တော့မယ် ညီလေးဆီ။ အမေတို့ကို တိုက်ရိုက်မပြောချင်ဘူး ဒီမှာပဲပျော်တဲ့ အကြောင်း။ ညီလေးကတော့ အစ်ကိုအဆင်ပြေရင်ပြီးတာပဲ အလည်အပတ်တော့ ပြန်လာဦးနော်တဲ့။ ဒီကောင်ပဲကောင်းတယ် အမေတို့ သား ပီသတယ်။
'တွီ...တွီ' တိုနီ့ဆီက စောင့်နေရတာ စိတ်မရှည်တဲ့ဖုန်းသံလာမှ ဘီယာသောက်ချင်စိတ် ပိုပြီးပြင်းပြလာပါရဲ့။ ဒီကောင်စောင့်နေတဲ့ မြို့ထဲက Roxy ဘားမှာ ကျွန်တော်မျက်စိကျနေတဲ့ စားပွဲထိုးမအသစ်ကလေးကလည်း ကျွန်တော့်ကို မျှော်နေမလားမသိ။ သူလည်း ကျွန်တော်လာတဲ့ အချိန်ဆို မျက်ဝန်းတွေက အရောင်ကိုတောက်နေရော။ အဲဒီကောင်မလေးက ကျွန်တော့်ထက်တော့ ငယ်မယ် အသက် ၂၅နှစ်လောက်ရှိမပေါ့။ ကျွန်တော်ကတော့ မကြာခင်သောအချိန်မှာ အသက် ၃၀ပြည့်တော့မှာ။ အသက်ကရလာပြီဆိုတော့ ဘီယာဗိုက်နဲ့လို့ မထင်နဲ့နော် ဘောလုံးအားကစားကို အတန်ကြာပြုလုပ်ခဲ့ဖူးသူဆိုတော့ ကိုယ်ခန္ဓာက ကြံ့ခိုင်ဆဲ၊ အားကစားရုံမှာ ဘော်ဒီ shape ကို သွားသွားထိန်းသိမ်းမြဲဆိုတော့ အရပ် ၆ပေ ၁လက်မနှင့်လျော်ညီစွာ ကြည့်ကောင်းသူလို့ဆိုရမှာပေါ့ ဟဲ...ဟဲ။ အညိုရောင် ညှို့မျက်ဝန်းတွေပိုင်ဆိုင်သတဲ့ အမျိုးသမီးမိတ်ဆွေတွေကပြောတာ။
'ကျွတ်' တိုနီ...ငနာကောင် ဘားထဲရောက်တော့ စောင့်နေသလား အောက်မေ့တယ် သူ့စော်ကရစ်လို့ ပြန်လိုက်ပို့နေတယ် ပြန်လာမယ် စောင့်နေတဲ့ ကျွန်တော့်ကို ထားခဲ့တယ် ဖုန်းမက်ဆေ့ခ်ျလေးပေးပြီး။ ကျွန်တော်လည်း ဘီယာတစ်ခွက်လောက်မှာကာ နည်းနည်းခြင်း ကစ်ပြီး တီဗီက အားကစားသတင်းကို ကြည့်ရှုနားထောင်နေရတယ်။ ဘေးက ထိုင်နေတဲ့ ခပ်တောင့်တောင့်ဘဲတစ်ပွေက စကားစတာနဲ့ ပြောဖြစ်ကြတယ် စကားလက်ဆုံပေါ့။ သူ့နာမည်က ရှိန်းတဲ့။ အားကစားကို ရူးရူးမူးမူးကြိုက်တဲ့ ပရိတ်သတ်တစ်ယောက်ဖြစ်ဟန်တူတာပဲ ရေပက်မ၀င်အောင်ပြောတော့တာ။ ကျွန်တော်လည်း အထက်တန်းကျောင်းတုန်းက ဘောလုံးအားကစားကို စွဲမြဲကစားခဲ့ပုံတွေအကြောင်း ပြောပြဖြစ်ပါတယ်။ ရှိန်းလည်း ငထွားပဲဗျ ကျွန်တော့်ထက် အရပ်ပိုရှည်မယ်၊ အညိုရောင် ဆံနွယ်ခွေတွေနှင့် အပြာရောင်မျက်လုံး ခန္ဓာ ကိုယ်က ကြွက်သားအပြည့်။
ရှိန်းက စီးပွားရေးအတွက် ခရီးသွားရင်း ဒီမြို့လေးကိုဖြတ်တာ နက်ဖြန်တော့ ခရီးဆက်ဖြစ်မလားမသိတဲ့။ ကျွန်တော်ကတော့ ဒီမြို့က ခရီးသွားကုမ္ပဏီ တစ်ခုမှာ အလုပ်လုပ်ပြီး အားလပ်ရက်ရနေလို့ လေနေတဲ့အကြောင်း ဒီဘားမှာ အလုပ်လုပ်တဲ့ စားပွဲထိုးမလေးနဲ့ ချိတ်မိချင်နေတာ သူမအလုပ်မဆင်းတာလားမသိ အရိပ်အခြည်တောင် မမြင်ရကြောင်း ပြောပြမိပါတယ်။ ရှိန်းက ရယ်မောကာ သောက်စရာရှိတာသောက် ခပ်ဟော့ဟော့ ကောင်မလေးတွေတွေ့တဲ့အခါ ဇာတ်လမ်းဆင်ကြတာပေါ့တဲ့။ ကျွန်တော် ဘီယာနောက် တစ်ခွက်ထပ်မှာလိုက်တာ အရက်သောက်ခြင်းအကြောင်း စကားစပ်မိကြပါတယ်။ ရှိန်းက တက္ကသိုလ်နေ့တွေတုန်းမှာ အရက် သောက်ခဲ့ ကြပုံကိုပြောပြပါရဲ့။ ကျွန်တော်ကတော့ ကျောင်းသားအလိမ္မာလုပ်ခဲ့တာဆိုတော့ သူပြောသမျှ ခွန်းတုံ့မပြန်နိုင်ပါဘူးလေ။
ရှိန်းက စပ်ဖြဲဖြဲပြုံးကာ ဘယ်လောက် ကစ်နိုင်သလဲ ပြိုင်ကြမလား ကျွန်တော့်ကိုမေးပါတယ်။ နောက်မှ သောက်တယ်ဆိုပေမယ့် ကျွန်တော်ကလည်း နောင်တော်တွေနှင့်အပြိုင် သောက်နိုင်တဲ့ လူဆိုတာ သူမသိသေးဘူး။ သူ့အမေးကို အရယ်အမောဖြင့် တုန့်ပြန်ရင်း လုပ်လိုက်လေကြာသလားလို့ဆိုပြီး စိန်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ (၆) ဂျားလောက်သောက်အပြီးမှာတော့ ဘားက ကျွန်တော်တို့ကို ဆက် မရောင်းတော့ပါ။ ရှိန်းက သူတည်းတဲ့ မိုတယ်ကအခန်းထဲမှာ အရက်တစ်ပုလင်းနှင့် ဘီယာအချို့ရှိသေးတယ် ထပ်ကိုင်နိုင်သေးရင် ရွေ့ မယ်တဲ့။ ဒီတော့ နှစ်ဦးသား ဘားကနေထွက် ညာဘက်လမ်းအတိုင်း ချိုးကွေ့လိုက်ကာ ရှိန်းတည်းခိုတဲ့ မိုတယ်ကိုသွားကြတာပေါ့။
'လုပ်လေ....ကြာသလားလို့ bro ရယ်'
ကျွန်တော့် ကားကို ဘားရဲ့ကားပါကင်မှာပဲ ထိုးထားခဲ့တယ်။ နှစ်ဦးသား ရှိန်းရဲ့ မိုတယ်ကို ခြေကျင် ဒိုးကြတာပေါ့နော်။ အခန်းထဲလည်း ရောက်ရော ရှိန်းတစ်ယောက် တီဗီကိုဖွင့် MTV Channel ကိုရွေးတော့တာပဲ။ ရေခဲသေတ္တာအသေးလေးထဲက သူ့ tequila ပုလင်းရယ်၊ ဘီယာသံဘူးနှစ်ဘူးရယ် ပြီးတော့ လှတပတ ကဒ်လေးတွေဆွဲထုတ်လာတယ်။ ကဒ်လေးတွေကိုချိုး အနိုင်အရှုံးကြည့်ကြမယ်တဲ့။ နိုင်တဲ့ သူက ရှုံးတဲ့သူငှဲ့ပေးတဲ့ အရက်ကို တစ်ခွက်မော့ရမယ်လေ။ ကဒ် game လေးကစားတော့ ကျွန်တော်ကပဲ ကံကောင်းနေသလားမသိ တစ်ခွက်ပြီး တစ်ခွက်။ ကျွန်တော် နှစ်လှည့်လောက်နိုင်တာပါပဲ။ ရှိန်းငှဲ့ပေးတာ သောက်ရင်း သူ့ရယ်သံဟာ နားထဲပိုကျယ်လာသယောင် ခံစားရတယ်။ ပုလင်းတစ်ဝက်နီးပါးကျိုးတော့ နှစ်ဦးသား အိပ်ယာပေါ်လဲတော့တာ။ ခပ်ခွာခွာလှဲနေကြတာမှာ ရှိန်းက channel တွေပြောင်းရင်း နောက်ဆုံး porn channel မှာအဆုံးသတ်တယ်။ 'bro....ဒီမိုတယ်က porn channel တော်တော်များများရှိတာပဲ' ကျွန်တော် သူ့အပြော ကြောင့် ခေါင်းကိုထောင် TV Screen ပေါ်က စော်ထွားထွားကြီးတွေကို သွားရည်ကျမိရဲ့။ မြင်ရတာက Lesbian တွေလားမသိ ပွတ်သပ် နှူးနှပ်နေတာတစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်။ ရှိန်းက ဒီမှာ ကျွန်တော်အိပ်သွားပါလားတဲ့ ကားမောင်းဖို့ အဆင်ပြေ မယ်မထင်ဘူးဆိုပဲ။ ကျွန်တော်လည်း ကျေးဇူးစကားဆိုရင်း ရှူးတွေကန်ပြီးချွတ် ရှပ်အင်္ကျီတွေဆွဲချွတ်ပြီး ခုတင်ပေါ်လှဲလိုက်ပါတယ်။ ပထမဆုံးအကြိမ် အမျိုးသားတစ်ယောက်နဲ့အတူ အိပ်ယာတစ်ခုထဲ လှဲလျောင်းခြင်းပေါ့။
ရှိန်း အိပ်ယာပေါ်က ထကာ ရေချိုးခန်းထဲဝင်သွားချိန်မှာ ကျွန်တော်က မွေ့ယာကြီးပေါ်မှောက်လျက် အိပ်မောကျစပြုချိန်ပါပဲ။ သူကတော့ ဘီယာနောက်တစ်ခွက်မော့ရင်း တီဗီပေါ်က အပြာကားကို ၀တ်ထားတဲ့ တီရှပ်ကိုချွတ် ဂျင်းဘောင်းဘီကိုဖယ် boxer ဘောင်းဘီ တိုလေး ဖြင့် ဆက်ကြည့်လေရဲ့။ ရှိန်း ကျွန်တော့် baggy jeans ဘောင်းဘီကို အလိုက်သင့်ချွတ်ပေးတယ်ဗျ။ အတော်အလိုက်သိတဲ့ ငနဲပဲ အိပ်ရ တာ ကသိကအောက်ဖြစ်နေတာ။ အာ..သူဘာလုပ်တာလဲ? ကျွန်တော့်တင်ပါးတွေကို ပွတ်သပ်ပြီး ခပ်ဖွဖွညှစ်တယ်။ ကျွန်တော်အိပ်မော ကျမကျ စမ်းသပ်ရင်း၊ တီဗီ screen ပေါ်က ဇာတ်ကားထဲကအတိုင်း သူလုပ်နေခြင်းလား? ကျွန်တော် အရမ်းအိပ်ချင်စိတ် ဖြစ်လာတာ ကြောင့် ဘာမှ မတုံ့ပြန်ဖြစ်ပဲ ဆက်လက်အိပ်ဖို့သာ အာရုံပြုမိပါတယ်။ ရှိန်းက ကျွန်တော့်တင်ပါးကို ခပ်ဆတ်ဆတ် တစ်ချက်ပုတ် လိုက်ရင်း 'bro.... စော်မိုက်မိုက်တွေ ကဲနေတာ မကြည့်ဘူးလား အရမ်းမိုက်တယ်ဗျ' သူမေးရဲ့။ အိပ်ချင်ပါတယ်ဆို သူက တစ်မျိုးဗျာ။
ဘာဖြစ်တာလည်း မသိဘူး။ ရှိန်းခပ်တိုးတိုး နှင့် စကားတွေဆို သူ့အကြောင်းတွေပြောပြနေတာကို နားကကြားနေရတယ်။ ကျွန်တော့် ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းတွေကို ပွတ်သပ်နေတာ မလှုပ်ရှား မငြင်းဆန်ချင်သလို ဖြစ်နေတာ။ ရှိန်းက သူဟာ အလုပ်အကိုင် အတွက် ခရီးသွားရင်း သူသဘောကျတဲ့ ထိတွေ့ခံစားမှုတွေကို ရယူလေ့ရှိသတဲ့။ ကျွန်တော် ဘားထဲကို လျှောက်လှမ်းလာကတည်းက သဘောကျခဲ့တာဆိုပဲ။ ဟာ...ကျွန်တော့်တင်ပါးတွေကို ခပ်ဖြေးဖြေးပွတ်သပ်ရင်း တစ်ဘက်စီကို ညှစ်ပြုသေးတယ်။ ကျွန်တော်သောက် မယ့် အရက်ထဲကို x pill တစ်ခုထည့်မွှေထားတာ အခု effect ပြပြီဆိုပါလား။ ကျွန်တော့် ဘောင်းဘီတိုကိုပါ ဆွဲချွတ်တော့တာပါလား။ ဒါကြီးကို ဘားမှာ အတူထိုင်ရင်း သွားရည်ကျနေခဲ့တာ အခုတော့ စားရကံကြုံပြီတဲ့။ ကျွန်တော့်တင်ပါးတွေကို အသာဖြဲ ခရေ၀ကျဉ်း ကျဉ်းကို သူကြည့်နေတာ အတော်ကြာတယ်။ လက်ညှိုးလေးနှင့် အသာဖိဖိပြီးလည်း သွေးတိုးစမ်းနေသေးတာပါ။ x pill ပါတဲ့ခွက်တိုင်း ကျွန်တော်သောက်ခဲ့မိတာဟာ အခုတော့ ရှိန်းပြုသမျှထဲ နစ်မျောလာရသလိုပဲ။ ဒါ...ဒါဟာ မဖြစ်သင့်ဘူးလေ။ ပူနွေးနေတဲ့ သူ့လက်တွေ ဟာ တင်ပါးတွေသာမက ပျော့ပျောင်းနေဆဲ ကျွန်တော့်ငပဲကိုလည်း ကိုင်ကြည့်ပွတ်သပ်တယ်။ ရှိန်းတစ်ယောက် ကျွန်တော့်ရင်အုပ်တွေ၊ အမွှေးနုတွေရှိတဲ့ ဗိုက်သားတွေမှတစ်ဆင့် ဆီးစပ်က ခြုံပုတ်ငယ်ကိုပါ ကစားတာလေ။
ကျွန်တော့်မျက်ဝန်းတွေကို မှေးထားပေမဲ့ ရှိန်းရဲ့ ကျွန်တော့် နှုတ်ခမ်းအစုံကို လျှာနဲ့ထိတွေ့လိုက်ကာ နှုတ်ခမ်းအစုံကို ခပ်မျှဉ်းမျှဉ်းစုပ်ယူ မှုတွေက ရင်ထဲ ရှိန်းတိန်းဖိန်းတိန်းဖြစ်လာသလို ခံစားရတယ်။ ရှိန်းရဲ့အနမ်းတွေဟာ ပိုမိုပြင်းပြသထက်ပြင်းထန်လာတယ်။ 'အခု မင်း ကြိုက်နေပြီဟုတ်? မင်းကို -ိုးစေချင်နေပြီ မဟုတ်လား...အွန်း' ကျွန်တော့်မျက်ခွံတွေကို တစ်ဝက်လှန်ကြည့်ပေမဲ့ ခဏတာပဲမြင်လိုက်ရတဲ့ မြင်ကွင်းကို မှတ်မိရပါတယ် မျက်ခွံတွေဟာ လေးနေတာ။ ကျွန်တော့်တစ်ကိုယ်လုံးအ၀တ်မပါတာကို သူအားပါးတရကြည့်နေတာရယ် မာတောင်နေတဲ့ သူ့ငပဲခပ်မတ်မတ်ကိုပါ မြင်လိုက်ရပါတယ်။ ချောဆီဆွတ်ထားတဲ့ သူ့လက်ချောင်းတွေဖြင့် ခရေ၀ထဲ အထုတ်အသွင်း သူလုပ်နေသေး။ ကျွန်တော် ထရပ်ဖို့ကြိုးစားတယ် ထထိုင်ဖို့ကိုရောပေါ့။ ဒါပေမဲ့ လူသေကောင်လိုပဲ ခန္ဓာကိုယ်ရွှေ့မရ။ အရာအားလုံး ခံစားသိရှိနေပေမဲ့ ရွှေ့လို့ မရခြင်းပါ။ မရခြင်းပါ။ သူ့ လက်ချောင်းတွေဖြင့် ကျွန်တော့်ခရေပေါက်ကို ကစားနေတာ စူးရှတဲ့နာကျင်မှုနဲ့ အာရုံတွေ နိုးကြွလာရပါတယ်။ ရှိန်းက ကျွန်တော့်ကို 'သွင်းတော့မယ် ငါ့ကောင်' တဲ့ ပြောနေပြီ။ ကျွန်တော်သူ့ကို တွန်းမထုတ်နိုင် ဘူး..အသံကျယ်ကျယ်ဖြင့် မအော်ဟစ်နိုင်ဘူး။ 'ဟေ့...မင်းဘာလုပ်တာလဲ? ငါ့ကိုယ်ပေါ်က ဆင်းစမ်း' လို့အော်တဲ့စကားက ခပ်တိုးတိုး ရယ်။ ရှိန်းက ဂရုမစိုက် ကျွန်တော့်ခရေ၀ထဲက သူ့လက်ကို အသာထုတ် ၀တ်ထားတဲ့ boxer ဘောင်းဘီကို အားလုံးချွတ်ပစ်လိုက်တာ ငပဲထွားထွားက ငေါက်တောက်။
ကျွန်တော့်ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းကလည်း ငထွားပါ။ ဒါပေမဲ့ သိတဲ့အတိုင်း အနောက်နိုင်ငံသား ရှိန်းက အတော်သာပါတယ်။ ရှိန်း မတ်တပ် ရပ်လိုက်ကာ မျက်စိပွင့်နေသော ကျွန်တော့်ဆီတည့်တည့်ကြည့်ပါရဲ့။ မာတောင်နေတဲ့ သူ့ငပဲကို လှုပ်ရမ်းကစားပြရင်း ကျွန်တော့်တင်ပါး တွေကို ဗုံတံခေါက်တယ်။ 'ဒါကြီးကို မင်းအပိုင်ပေးတော့မှာအခု....မင်းရဲ့ ခပ်ကြပ်ကြပ် အပျိုစင်ပေါက်ထဲထည့်နေပြီ...ဟီး' ကျွန်တော် ဘာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ မယုံနိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်။ ခရေ၀ထဲ သူ့လက်ချောင်းတွေထည့်ကစားတုန်းကတောင် သေလောက်အောင်နာတာ ဒီငပဲကြီးကိုသာ ထည့်ရင် သေပြီဆရာ။ ကျွန်တော်ထထိုင်ဖို့ ကြိုးစားတာ ခန္ဓာကိုယ်က မလိုက်နာသလို အော်ဟစ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့ အသံ ဟာလည်း ခပ်တိုးတိုးဘဲထွက်တယ်။ ရှိန်း....ကျွန်တော့်တင်ပါးကို ခုတင်စွန်းဆီ ပေါင်ကနေဆွဲယူ ခြေဖ၀ါးတွေကို သူ့ပခုံးပေါ်တင်လိုက် ကာ တစ်တီတူးဖြစ်စေတော့တာပါပဲ။
ကျွန်တော် ရူးတော့မယ်....အ၀တ်မပါ ကိုယ်ဗလာနဲ့လူကို fuck doll တစ်ခုလို ထမ်းထားတဲ့ ငနဲတစ်ပွေနှင့် အရှက်မရှိ နေနေရတဲ့ အနေ အထားမှာ။ သူက သူ့ငပဲကိုမာသထက်မာအောင် ဆွနေတယ်လေ။ ခပ်လှမ်းလှမ်းအံဆွဲထဲက ချောဆီဘူးကိုယူ သူ့ငပဲကို လည်းလိမ်းရင်းဆွ၊ ကျွန်တော့်ခရေ၀ကိုလည်း များများသွင်းတယ်။ ပြီးတော့ ငပဲထွားထွားကို တစ်ထစ်ခြင်း တစ်ရစ်ခြင်း ဖိသွင်းတာပေါ့ အချိန်မဆိုင်းပါ။ 'No...No...No' ကျွန်တော့် ငြင်းဆန်သံက ခပ်တိုးတိုးသာထွက်ရဲ့။ ရှိန်းက အတွင်းထဲရောက်သထက်ရောက်အောင် ဖိသွင်းလိုက်တာ နောက်ဆုံး အဆုံးထိ ဒုတ်ဒုတ်ထိ သူ့ဟာတစ်ခုလုံး အရင်းထိကပ်သွားပါတယ်။ ကျွန်တော့်နှုတ်ဖျားက နာကျင်မှုကြောင့် ခပ်အုပ်အုပ် ညည်းညူသံသာထွက်နိုင်ပါလေ့။ ရှိန်းကတော့ တစ်ချက်ခြင်းအသွင်းအထုတ် မှန်မှန်လုပ်နေတာ ကျွန်တော့်ရဲ့ အသံတိတ် အော်ဟစ်မှုနှင့်အတူ မျက်လုံး ထောင့်စွန်းက မျက်ရည်တွေ လိမ့်ဆင်းနေမှုကို သိမယ်တောင်မထင်။ 'အာ...အ...အ' ကျွန်တော် နာကျင် နေရာကနေ ဘာ...ဘာဖြစ်လာတယ်မသိ ရင်ထဲမှာ သာယာမှု တစ်ခုရလာသလိုပဲ။
ရှိန်းတစ်ယောက် မြင်းတစ်ကောင်ကို ဒုန်းဆိုင်းစီးသလို လှုပ်ရှားလာချိန်မှာတော့ ကျွန်တော်သည်လည်း လိုက်လံမောလျနေရပြီ။ သွင်းတယ် ထုတ်တယ် ခပ်သွက်သွက်။ နောက်ဆုံးတော့ ရှိန်းတစ်ယောက် ခါးမှာ အင်ဂျင်စက်တပ်ထားသလို စက်သေနတ်ဆွဲရင်း ကျွန်တော့်ခရေတွင်းထဲ ဖိကပ်ကာ သုတ်ရည်တွေ ပန်းထည့်လိုက်ပါတော့တယ်။ ပြီးတော့ တဖြည်းဖြည်းဆွဲထုတ်တော့တာ။ ချွေးစက် အချို့သီးနေတဲ့ ရှိန်းမျက်နှာဆီ မူးရိပ်မပြေသေးတဲ့ ကျွန်တော့်မျက်ဝန်းတွေနှင့် မော့ကြည့်ရင်း ဘာတွေဖြစ်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာ မယုံနိုင် သေးဘူး။ ရှိန်း ကျွန်တော့်ခြေထောက်တွေ ပခုံးပေါ်တင်ထားတဲ့ အနေအထားမှ မွေ့ယာပေါ် ကျွန်တော့်ကိုယ်ခန္ဓာအား အလိုက်သင့်ချကာ x pill အစွမ်းနဲ့ မာတောင်လာတဲ့ ကျွန်တော့်ငပဲကို သူဆွဲကိုင်ပါလေ့။ အား...အကြောတွေထဲက ဒိုးဒိုးဒန့်ဒန့်ဖြစ်သွားအောင် ရှိန်းရဲ့လျှာ တွေ အာတွေကစွမ်းပါတယ်။
ရှိန်း ကျွန်တော့်ရွှေဥတွေကို လျှာအားအပြားလိုက်ကပ်ကာ ကစားပါတယ် ကြီးထွားမတ်ထောင်နေတဲ့ ငပဲထိပ်ကို တပြိုင်တည်း လက်ဖြင့် ဆုပ်ကိုင်ကစားရင်းပေါ့။ ကျွန်တော့်မျက်ဝန်းထောင့်စွန်းက မျက်ရည်တွေစီးဆင်းရပြန်ပါတယ်။ အထိအတွေ့ကြောင့် သာယာပေမယ့် ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ အခြေအနေကြောင့် ၀မ်းနည်းစိတ်က တစ်ဝက်လေ။ x pill အကြောင်းမသိ၊ သူ့အကြောင်းဖြစ်ပေါ်လာသော ခံစားချက် တွေအကြောင်း မသိတဲ့ ကျွန်တော့်ဖြစ်အင်ကို သဘောကျနေဟန်ဖြင့် ရှိန်းမျက်နှာမှာ အပြုံးတွေတွဲခိုလို့ပါပဲ။ ခဏနေတော့ ကျွန်တော့် ငပဲဟာ အမြှောက်ဆံလိုပန်းထွက်လာတဲ့ အရည်ပျစ်တွေကို သူအသာပွတ်သပ်ကြည့်ရင်း ကျေနပ်နေလေရဲ့။ အိပ်ယာပေါ်မှာ ဖား တစ်ကောင်လို လဲလျောင်းနေရစဉ်မှာ ရှိန်းရေချိုးခန်းထဲဝင်သွားပြီး ရေချိုး၊ အ၀တ်တွေလဲလှယ်၊ အထုပ်အပိုးတွေအားလုံးယူကာ ကျွန်တော့်ဆီလာကာ နှုတ်ခမ်းအစုံကို အားရပါးရအနမ်းပေးရင်း ထွက်ခွာသွားပါတော့တယ်။
ကျွန်တော့်မှာတော့ ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံး ကောင်းကောင်းလှုပ်ရှားလို့ရချိန်မှာမှ မွေ့ယာပေါ်ကထ ရေနွေးနွေးဖြင့်ချိုးကာ အ၀တ်အစား တွေကို သပ်သပ်ရပ်ရပ်ဝတ်ဆင်ရင်း ကျွန်တော့်ကားရှိရာကို အရှက်သည်းတဲ့ ခြေကျင်ခရီးဖြင့် လစ်ခဲ့ရပါတယ်။
မယုံနိုင်သေးတဲ့ မုဒိမ်းကျင့်ခံခဲ့ရမှုမှာ ကျွန်တော့်စိတ်တွေဟာ ရှုပ်ထွေးနေသလို သာယာမှုကိုလည်း ခံစားခဲ့ရသလို ထင်မိပါတယ်။ သန်းခေါင်ယံ နှစ်ချက်တီးအချိန် တရွေ့ရွေ့လမ်းလျှောက်နေတဲ့ ကျွန်တော့်အတွေးထဲမှာ အဖေတို့ဆီ တကယ်မပြန်ချင်တော့တဲ့ စိတ် ဖြစ်ပေါ်လာမိပါတယ်။ ကျွန်တော့်ဖြစ်အင်တွေကို သူတို့များသိရင် ဘယ်လိုများ ခံစားမိကြမှာပါလိမ့်။ ကျွန်တော့်ကို ဘယ်လိုမျက်လုံး တွေ ဖြင့် ကြည့်ကြမလဲ ကျွန်တော် ဘာဖြစ်သွားပြီလည်းအခု လိင်တူခြင်းဆက်ဆံခဲ့ရပြီ အား....ခေါင်းရှုပ်တယ်ကွာ...သွား။
Alex Aung (26-2-2011)
ဇော်နိုင်ကို ကျွန်တော့်အိမ်အနီးအနားဝန်းကျင်မှာ မကြာခဏတွေ့ရတတ်တဲ့ အလုပ်မျိုးစုံ ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်လုပ်တတ်သူ တစ်ယောက် လို့ ဆိုရမလားပဲ။ ကျွန်တော့်ခြံရဲ့ တစ်ခြံကျော်က ဦးရဲလွင်ရဲ့ ခြံစည်းရိုးတစ်ခုကို သူ့ဒီဇိုင်းနှင့်သူ ဆောက်လုပ်ကာရံပေးခဲ့တာတဲ့။ သူ့ အချိန်နှင့် လုံ့လကို အကျိုးရှိရှိ အသုံးချတတ်ပုံနှင့် အနုပညာအရည်အသွေးစိတ်ကူးစိတ်သန်းရှိတာကို သတိပြုမိပါရဲ့။ မနေ့ညက ဖတ်မိ တဲ့ Home and Garden မဂ္ဂဇင်းထဲက ဒီဇိုင်းတစ်ခုအပြင်ကို ထွက်လာတဲ့အတိုင်းပါပဲ။ အဲဒါ ဇော်နိုင့်ဒီဇိုင်းပေါ့။ သူ ပြတင်းပေါက်ပျက်တာ တွေပြင်တယ်၊ မှန်ပြတင်းကွဲသွားရင် လဲလှယ်ပေးတယ်၊ နံရံတွေ ခြံစည်းရိုးတွေ သင်္ဘောဆေးသုတ်ချင်ရင်လည်းရတယ်၊ ပြီးတော့ ရေပိုက်ဆက်တာပြုပြင်တာကိုလည်း ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်။ သူဟာ အတော်များများကို တကယ့်ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် ပြုပြင်နိုင်သူပဲဗျ။ သူ့ကိုပေးရတဲ့ စရိတ်ကလည်း လူတိုင်းလက်ခံနိုင်တဲ့နှုန်းပါ။
ဦးရဲလွင်ရဲ့ ခြံစည်းရိုးကို သူကာရံပြီးနောက် ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားမှန်းသိတော့ လာကြည့်ဖို့ဖိတ်ခေါ် ခံရပါတယ်။ ကျွန်တော်သွားကြည့် တာမှာ ဇော်နိုင်က ခုံတစ်ခုမှာ ထိုင်နေတာကို တွေ့ရပါရဲ့။ သူ့အပေါ် ကျွန်တော့်မျက်ဝန်းတွေ အလည်ရောက်မိတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အိနြေ္ဒမပျက်အောင် ထိန်းလိုက်ရပါ့။ သူဟာအလွန်တရာမှ ကြည့်ကောင်းပြီး ချောမွေ့လှသူတစ်ယောက် အသက် ၃၅နှစ်ဝန်းကျင် လောက်ရှိမယ်။ သူ့မျက်ဝန်းတွေက မျက်တောင်ရှည်များဖြင့် ၀န်းရံထားပေမဲ့ သူညှပ်ထားတဲ့ ဆံပင်ဒီဇိုင်းက တိုကပ်လွန်းပါတယ် လွန်ခဲ့တဲ့ အပတ်ကမှ ညှပ်ထားသလားထင်ရတာ။ သူ့ခန္ဓာကိုယ်တည်ဆောက်ပုံကလည်း ကြွက်သားများဖြင့်အပြည့်ပါ။ သူ့အလုပ် အကိုင်သဘာဝအရ ခန္ဓကိုယ် shape ကဖြစ်နေတာလေ။ သူဟာ လွတ်လပ်တဲ့ ကန်ထရိုက်တာတစ်ယောက်၊ နောက်အိမ်နီးချင်း တစ်ယောက်ရဲ့ အလုပ်ကို လက်မခံမီ အရင်တစ်ယောက်ရဲ့အလုပ်ကို အကောင်းဆုံး လှည့်မကြည့်ရအောင် ပြုလုပ်ပေးလေ့ရှိပါတယ်။
ဇော်နိုင့်ကို ကျွန်တော်က အိမ်မှာ တစ်ယောက်တည်းနေတော့ ပြုပြင်စရာတွေ အများကြီးပဲ အချိန်ရတဲ့အခါ အိမ်ဘက်ကို လာခဲ့ပါဦးလို့ ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ ကြည့်စရာ ရှုစရာတွေပြုပြီးရင် သူဘာတွေပြင်ရမယ် ဘာတွေလိုအပ်တယ်ဆိုတာ သိမယ်လေ။ သူကလည်း အိုကေတဲ့။ ဇော်နိုင်က straight ဆိုတာ ကျွန်တော်သိပြီးသားပါ။ ဒါပေမဲ့ gay တွေကို နားလည်တယ်၊ ပြီးတော့ gay သူငယ်ချင်းများစွာ သို့မဟုတ် အစုအဖွဲ့ တွေနှင့်လည်း အဆင်ပြေပြေ ပေါင်းသင်းတတ်သူပါ။ 'ကိုယ်နှစ်သက်ရာ ဘ၀ရှင်သန်မှုနှင့် နေထိုင်ပါ၊ သူသည်လည်း သူနှစ်သက်ရာ ဘ၀ရှင်သန်မှုအတိုင်း နေမယ်' ဆိုတဲ့ သဘောထားပါပဲ။ သူက ရင်းရင်းနှီးနှီးပေါင်းသင်းတတ်သူဖြစ်ပြီး ဟာသအမြင်မှာ ပါရမီရှိလှပါတယ်။
ဇော်နိုင် ကျွန်တော့် အိမ်၊ခြံဝင်းအတွင်း လှည့်ပတ်ကြည့်ရှုပြီးနောက်မှာတော့ ခြံဝင်းကို ကာရံထားတဲ့ အကာအရံတွေကို ပြန်ဆောက်မယ်၊ အိမ်ရှေ့ ဆင်ဝင်ဘေး ၀ရံတာတွေ နှင့် အိမ်အနောက်ဘက် ဆင်ဝင်တွေကို ပြန်ပြင်ဖို့လိုမယ် ပြောပါတယ်။ ကာလာနှင့်ဆွဲထားတဲ့ ပုံကြမ်း တွေကို ပြသပြီး အကြံဥာဏ်တွေလည်းပေးရဲ့။ ကျွန်တော် ရွေးချယ်ဖို့ စတိုင်လ် လေးမျိုးပေးပြီး၊ ရွေးချယ်ပြီးတာနဲ့ တခြား idea ကောင်း တာလေးတွေနှင့်ပါ လုပ်ဆောင်ပေးပါမယ်ပေါ့။ ပထမဆုံး ပုံကြမ်းကိုက ကျွန်တော့်အိမ်အနေအထားနှင့် သင့်တော်ပါတယ်။ လုပ်လက်စ အလုပ်ပြီးတာနှင့် နှစ်ပတ်အတွင်း ကျွန်တော့်ဆီလာပြီး အလုပ်လာဆင်းပါ့မယ် ပြောပါတယ် သူက။
ဇော်နိုင်လာတဲ့နေ့မှာတော့ ဆင်ဝင်အဟောင်းမှ မသင့်တော်တော့သောအရာများကို နာရီအနည်းငယ်အတွင်းမှာပဲ ဖြုတ်ကာပြင်ဆင်ပါ တယ်။ သူ အလုပ်လုပ်တာ ဆူညံသံအရမ်းမထွက် ပျက်စီးတာလည်း နည်းပါရဲ့။ ကျွန်တော် မကြာခဏ ice tea ဒါမှမဟုတ် ရေသန့် ပုလင်းတွေ ယူဆောင်ပြီး ချပေးရတာပေါ့ သူ့အနား။ လှုပ်ရှားနေတဲ့ သူ့ခန္ဓာကိုယ် ကြွက်သားအမြှောင်းတွေ၊ လက်မောင်းကြွက်သား၊ တင်သားဆိုင်တွေ စောင့်ကြည့်ရတာ ကျွန်တော့်ပေါင်ကြားက ညီဘွားကို တကယ်လှုပ်ခတ်စေတယ်။ ကျွန်တော် hard-on ဖြစ်လာတာကို သူမမြင်စေချင်တာကြောင့် အိမ်ထဲပြန်ဝင်ပြီး အလုပ်ရှုပ်ချင်ယောင်ဆောင်ရတာပေါ့လေ။
အခုအချိန်တိုင်း နှင့် မကြာခဏဆိုသလို သူ့အပေါ်နှစ်လိုဖွယ် မှတ်ချက်တွေပေးနေမိပါတယ်။ ကျွန်တော့်ကို ကလိထိုးတာမဟုတ်ဘဲ စကားလုံးတွေနှင့်ကို ပျော်ရွှင်ရယ်မောစေပါရဲ့။ အလုပ်လုပ်တဲ့နားသွား စကားပြောတဲ့ တစ်ချိန်မှာတော့ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းထဲက တစ်ယောက်ဟာ သူ့ကြောင့် turn-on ဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းပြောမိပါတယ်။ သူငယ်ချင်းက ဇော်နိုင်ရဲ့ ညာလက်လက်မောင်းမှာသာ ခေါင်းအုံးပြီး အိပ်စက်ခွင့်ရရင် အလုပ်မှ အဖြုတ်ခံရရင်လည်း ကျေနပ်တယ်လို့ ပြောခဲ့တာရော ပြောပြလိုက်တာပါ။ ဇော်နိုင်က straight၊ အဲဒီလိုမျိုး တစ်ခုခုကို လုပ်မှာမဟုတ်ပါဘူးလို့ ကျွန်တော်ကပြန်ပြောခဲ့တာရောပေါ့လေ။ ကျွန်တော်ပြောပြလိုက်တာကို ဇော်နိုင်က နားထောင်နေပြီးနောက် ကျွန်တော့်မျက်နှာကို စိုက်ကြည့်ကာ 'အစ်ကို မသိနိုင်ပါဘူးဗျာ၊ ညီလုပ်ချင်လုပ်မယ်၊ မလုပ်ချင်လည်း မလုပ်ဘူး ဆိုတာမျိုးကိုလေ' တဲ့ပြောတယ်။
ဇော်နိုင်..ကျွန်တော့်အိမ်ရဲ့ နောက်ဘက်ဆင်ဝင်နှင့် ခြံစည်းရိုးအားလုံး ပြုပြင်ဖာထေးပြီးနောက် အိမ်အတွင်းဘက်က ပြင်စရာတွေကို စစ်ဆေးဖို့အချိန်ရောက်ပြီ။ ကျွန်တော့်အိမ်တွင်း ပြတင်းပေါက် အချို့ရယ် နံရံကပ်စက္ကူအချို့ပြန်ပြုပြင်ဖို့ လိုသေးတယ်။ ဇော်နိုင်က အဲဒီအရာအားလုံးကိုလုပ်နိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့ ကျွန်တော့်အတွက် နည်းနည်း အခက်တွေ့စေတယ်ဆိုတာ မြင်လာရပြီ။ သူက အခုကျွန်တော် နှင့်အတူ အိမ်ထဲမှာဆိုတော့ သူ့ကြောင့်ထကြွနေတဲ့ ကျွန်တော့်ပေါင်ကြားက ပြဿနာကို ဖုံးကွယ်ဖို့မလွယ်ကူတော့ဘူးလေ။
ရာသီဥတုက ပူပြင်းတဲ့နေ့ဖြစ်တာကြောင့် နေရတာ အိုက်စပ်စပ်နဲ့။ ဇော်နိုင်ကတော့ ပြတင်းပေါက်ဘောင်တွေနဲ့အလုပ်များနေတယ်။ အပြင်က ၀င်လာတဲ့ အပူရှိန်တွေကြောင့် သူဝတ်ထားတဲ့ T-shirt က ချွေးတွေနဲ့ ရွှဲရွှဲစိုနေရော။ အလုပ်လုပ်နေရင်း နေရခက်လာတာ ကြောင့်ထင့် ချွေးစိုနေတဲ့ တီရှပ်ကိုချွတ်ပြီး ကုလားထိုင်အလွတ်တစ်ခုပေါ် လွှားတင်လိုက်တယ်။ အခု သူ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာ ဂျင်း ဘောင်းဘီတိုရယ် ကင်းဘတ်ဖိနပ်တစ်ရံရယ်ပဲရှိတော့တာ။ ချောမွတ်လှတဲ့ သူ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာ ချွေးစက်တွေနှင့်တောက်ပြောင်နေတာ ရင်အုပ်ပေါ်မှာလည်း အများအပြား။ သူအလုပ်လုပ်နေတုန်း ကျွန်တော်တို့ စကားစမြည်ဆက်ပြောရင်း သူ့မိသားစုနောက်ခံအကြောင်းကို စပ်စုကြည့်မိပါတယ်။ နောက်ဆုံးတော့လည်း သမီးရည်းစားကိစ္စဘက်ရောက်သွားကြတာပေါ့နော်။ သူ့မှာ အရမ်းချစ်ရတဲ့ ချစ်သူ ကောင်မလေးတော့ မရှိသေးပေမဲ့ လောလောဆယ်တွဲနေတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်တော့ ရှိပါသတဲ့။ သူတို့နှစ်ယောက်ဟာ သူငယ်ချင်းကောင်းများပါဆိုပဲ။ ကျွန်တော့် သိချင်တဲ့အရာကို bold လုပ်ပြီးမေးရတာပေါ့။ 'သူငယ်ချင်းပဲလား? ကိုယ်ဆိုလိုတာက no sex or anything?' သူ့မျက်နှာ အနည်းငယ်ရဲတက်လာကာ မ၀ံ့မရဲအပြုံးဆင်ပြီး 'ညီတို့ တစ်ကြိမ်တော့ လုပ်ဖူးတယ်ထင်ပါရဲ့' ဖြေတယ်။ ကျွန်တော်က မင်းပစ္စည်းနဲ့ဆို ဘယ်မိန်းကလေးမှ မငြင်းနိုင်ပါဘူးလို့ ပြောလိုက်မိတော့ သူ့မျက်နှာမှာ အပြုံးပေါ်ပြန်ရင်း တခြားလူတွေ အတွက်တော့ ဟုတ်မှာပါ သူ့အတွက်တော့ ဒီလိုပါပဲတဲ့။
ဟိုဒီကိစ္စတွေထဲ သည်အကြောင်းအရာမှာတော့ အမျိုးသားတစ်ချို့ရဲ့ ကြိုးပမ်းချက်အပေါ် သူဘယ်လိုတုန့်ပြန်လဲဆိုတာတွေပါ အထူး ပြုစူးစမ်းကြည့်ပါတယ်။ သူက အခုအချိန်ထိတော့ စိတ်မ၀င်စားမိဘူးတဲ့။ 'ဒီအချိန်မှာတော့..'အား...ဇော်နိုင်နည်းနည်းရှက်သွားပုံပေါ်တယ် လို့ ခံစားမိတာကြောင့် ကျွန်တော် အဲသည့်အကြောင်းအရာကိုလျောချပြီး စကားလမ်းကြောင်းပြောင်းလိုက်ပါတော့တယ်။
နောက်တစ်နေ့မနက် ၈း၃၀ လောက်မှာ ဇော်နိုင် ပြတင်းတွေကို ဆက်လက်ပြုပြင်ဖို့အသင့်ရောက်နေပြီ။ ဒီတစ်ခါတော့ သူ တီရှပ်လက် ပြတ်ရယ် ချည်သားဘောင်းဘီ ခပ်ပါးပါးအတိုတစ်ထည်ကို ၀တ်လာတယ်။ ကျွန်တော်စိုက်ကြည့်တယ်လို့ မဆိုလိုပေမဲ့ သူအောက်ခံ ဘောင်းဘီ ၀တ်မလာတာကိုတော့ သတိမပြုဘဲ မနေနိုင်ပါဘူး။ ခပ်လှလှ ငပဲကောက်ကြောင်းကို ကျွန်တော်မြင်နေရသား။ ကျွန်တော် စိုက်ကြည့်ဖို့ မကြိုးစားပေမဲ့ သေချာပေါက်ပြောနိုင်တာက အာရုံစိုက်နေတယ်ဆိုတာ သူသိတယ်။ သူက မနက်စောစော အလုပ်ပြီးချင် တယ် နေ့လည်ပိုင်းက ရာသီဥတုပူတာကြောင့်ပါတဲ့။ အပေါ်ဝတ်ထားတဲ့အင်္ကျီက ချွေးနဲ့ရွှဲလာပြန်တော့ သူဝတ်ထားတဲ့ ဘောင်းဘီက လည်း ရေချိုးခန်းထဲက ရေပန်းအောက်ဝင်ခဲ့သလိုဖြစ်နေတယ်။ သူ့လိင်တံက ထိပ်အရေပြားဖြတ်ထားပြီး မှိုပွင့်အလား အတော်ကြီးတဲ့ ခေါင်းက အာရုံစိုက်စရာဖြစ်နေရဲ့။ သူ့ရွှေဥတွေကလည်း တွဲလောင်းနဲ့ အိတ်တစ်ခုထဲထည့်ထားသလိုပါပဲ။
နေ့လည် ၁း၀၀ နာရီလောက်ရောက်တော့ အသုပ်စုံနှင့် အအေးသောက်ရအောင်လို့ ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ သူ မဆိုင်းမတွဘဲ ကျွန်တော့်ဖိတ်ခေါ်ချက်ကိုလက်ခံလိုက်ကာ မီးဖိုချောင်ထဲက စားပွဲမှာထိုင်လိုက်ပါတယ်။ ကောင်းတာပေါ့လေ သူ့ဘော်ဒီခပ်လှလှရယ် အားလုံးကိုမြင်ကွင်းပြည့်ကြည့်နိုင်တာလေ တခြားခုံမှာ မထိုင်ဘဲ။ သူ ice tea ကို တစ်ငုံခြင်းသောက်ရင်း အရွက်စုံသုပ်ကို ခပ်ဖြည်းဖြည်း ၀ါးတယ်။ သူ သတိမမူမိဖို့ဆုတောင်းရင်း သူ့ပေါင်ခြံကို ကျွန်တော် ခိုးကြည့်မိသေးရဲ့။ ကျွန်တော်တို့ ပြတင်းပေါက်ဘောင်တွေ ပြင်ပြီး ရင် နောက် ထပ် အလုပ်အပ်စရာကိစ္စတွေအကြောင်း ဆွေးနွေးဖြစ်ကြပါတယ်။ သူက ကျွန်တော့် အ၀တ်ဘီရိုမှာ အံဆွဲကောင်းကောင်း တွေရှိဖို့ လုပ် ပေးမတဲ့။ သူ အစားအစာကိုဆက်စားနေတုန်း ကျွန်တော့်အာရုံထဲမြင်လာရတာကတော့ ခပ်ဟဟဖြစ်နေတဲ့ သူ့ချည်သား ဘောင်းဘီတို ခြေထောက်တစ်ဖက်မှ ကွမ်းသီးခေါင်းကို ရှင်းရှင်းပေါ့။ နည်းနည်းပါးပါး သူရွှေ့ပြုလိုက်ရင် အပြင်ကိုလျောကနဲထွက်လာ မှာဗျ။
ဇော်နိုင် ..ကျွန်တော့်ကို နည်းနည်းများ နောက်ပြောင်ကျီစယ်နေသလား ခံစားမိရပါတယ်။ ကုလားထိုင်မှာထိုင်ရင်း သူ့ဖင်ကို ဟိုသည် ရွှေ့၊ နောက်တော့ သူ့ခြေထောက်ကို သူ့ရှေ့ကို ဆန့်လိုက်တာမှာ သူ့ငပဲခေါင်းဟာ ၀တ်ထားတဲ့ဘောင်းဘီတိုကနေ ချောင်းကြည့်ရုံ မကပြူထွက်လာသလိုပါပဲ။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်း အဲဒီမြင်ကွင်းကိုကြည့်ပြီး ဘောင်းဘီထဲက ညီဘွားက အတင်းခေါင်းထောင် လာတယ်လို့ ခံစားမိရပါပြီ။ ဇော်နိုင်က အသုပ်ကိုမွှေပြီး စားနေရင်း ကျွန်တော့်ကိုကြည့်တယ်။ သူ့နှုတ်ခမ်းထောင့်စွန်းမှာ အပြုံးတစ်ခု တွဲခိုသွားရော။ သူ့ပေါင်ခြံကို ကျွန်တော်ကြည့်နေတာ သူမြင်သွားမှန်း ကျွန်တော်သိတယ်။ သူစားနေတဲ့ အရာ လက်စသပ်နေစဉ်အထိ ကျွန်တော်တို့ စကားဆက်ပြောကြပါရဲ့။ သူ မတ်တပ်ရပ်လိုက်စဉ်မှာတော့ ဆွဲထုတ်ထားသလို ဘောင်းဘီအနားလန်ရာမှပေါ်နေတဲ့ ငပဲခေါင်းဟာ အနည်းငယ်မာပြီး ပြန်ဝင်သွားတယ်။ အဲဒါက သူနည်းနည်းများ စိတ်လှုပ်ရှားလို့ ဆိုနိုင်ပါ့မလား?
ဇော်နိုင် လမ်းထလျှောက်လိုက်ကာ 'အလုပ်ရှိတဲ့ဆီ ပြန်သွားတာကောင်းတယ်' သူ အရမ်းစိတ်လှုပ်ရှားမသွားမီတဲ့။ ဟုတ်တယ်။ အဲဒီလို သူ ပြောရခြင်းက ကျွန်တော့်စိတ်ကို နှိုးဆွသလိုဖြစ်နေကြောင်း သူ့အတွက်ထင်ရှားနေတာပဲနော်။ ကျွန်တော်ကလည်းပြောလိုက်ပါတယ် အဲဒါကောင်းတယ် ဒီလိုမှမဟုတ်ရင် မင်းလူပျိုရည်ပျက်သွားနိုင်တယ်လို့။ သူ သဘောတကျရယ်မောကာ လူပျိုရည်ပျက်ဖို့ဆို သင့်တော် တဲ့တစ်ယောက်ယောက်က ကျွန်တော့်ထက် ကောင်းမယ်မထင်ပါတဲ့။ သူမီးဖိုချောင်ထဲက ထွက်သွားပြီး ဂိုထောင်ထဲကို အတိုင်းအတာ တွေတိုင်းဖို့သုံးရာမှာ လိုတဲ့ပစ္စည်းကို သွားယူလေတယ်။
ခဏလေးသော အချိန်မှာပဲ သူပြန်လာတယ်၊ ပြီးတော့ အ၀တ်ဘီရိုကြီးအတွင်းပိုင်းကိုဝင်ပြီး တိုင်းတာတယ်လေ။ သူက အထဲမှာမှောင်နေ တာကြောင့် ဓာတ်မီးတစ်ခုလောက်များ ရှိရင်ပေးပါတဲ့။ ကျွန်တော်လည်း စာကြည့်စားပွဲရဲ့ အံဆွဲထဲက ဓာတ်မီးကိုယူပြီးပေးလိုက်ပါတယ်။ ဓာတ်မီးကိုကိုင်ထားရင်း သူသိချင်တဲ့ အတိုင်းအတာအကျယ်အ၀န်းကို တပြိုင်တည်းလိုလို တိုင်းဖို့ကြိုးစားနေလေရဲ့။ ကျွန်တော်ကိုင် ထားပေးရမလား အဲဒါကိုလို့ မေးလိုက်တော့။ 'ဓာတ်မီးကိုပြောတာလား?' လို့ မေးပြီး သူ့နှုတ်ခမ်းအစုံက ပြုံးသွားပြန်ရော။ ဘီရိုကြီးထဲ မီးချောင်းတစ်ချောင်းလောက် ခဏသွယ်ပေးရမလား ထပ်ပြောလိုက်တော့ သူက ဓာတ်မီးကို ကျွန်တော်ကိုင်ပေးရင်ရပါပြီတဲ့လေ။ ဓာတ်မီးကိုပေးတဲ့ခဏ သူငုတ်တုတ်ထိုင်ရင်း ကသိကအောက်ဖြစ်နေတဲ့ ပေါင်ကြားက ငပဲကို သက်သောင့်သက်သာဖြစ်အောင် လက်နဲ့ နေရာချနေတယ်။ အိုး....ဘောင်းဘီကပါးတော့ သူ့ငပဲရဲ့အရှည်နဲ့ ကွမ်းသီးခေါင်းကို ရင်ခုန်စဖွယ်မြင်ရပါလေ့။
ဘီရိုအောက်ခြေအကျယ်ကိုတိုင်းဖို့ သူ ဒူးထောက်လိုက်တယ်။ သူ့ဦးခေါင်းက ကျွန်တော့်ပေါင်ခြံက ငပဲနှင့် တတန်းထဲ။ အလျားအနံ တိုင်းနေရင်း ကျွန်တော့်ပေါင်ခြံက အထုပ်အထည်ဆီလှည့်ကာ တန်းပြီးကြည့်တယ်။ ခဏနေတော့ နောက်တစ်ခါပြန်ကြည့်ပြီး ပြုံးပြန် ရော။ 'အစ်ကိုတစ်ခုခုကြောင့် turn-on ဖြစ်နေတယ် ဟုတ်' ကျွန်တော်လည်း တံတွေးကို ဂလုဆိုမျိုချရင်း ပြန်ဖြေရတာပေါ့။ 'အင်း.. ဟုတ်ပါ့။ ဒီလိုဖြစ်နေတာကြီးနဲ့ တချိန်လုံး လမ်းမလျှောက်ချင်ဘူးကွာ' ဇော်နိုင်က ကျွန်တော့်ကို မော့ကြည့်ပြီး 'ညီ့ကြောင့်လို့ ဆိုလိုချင် တာလား? တဲ့။ 'ဇော်နိုင်၊ သေချာတာပေါ့ကွာ မင်းစားပွဲမှာထိုင်နေရင်း မင်းပစ္စည်းကို ပြသလိုဖြစ်ကတည်းက ကိုယ်စိတ်လှုပ်ရှားနေတာ။ ဘောင်းဘီကြားက မင်း-ီးထိပ်ကို ခပ်ရေးရေးမြင်ရတာနဲ့တင် လုံလောက်တဲ့ ကျန်းမာသော gay တစ်ယောက်ဖြစ်နေတာကိုး အစ်ကိုက' 'မင်းက အတော်ကြည့်ကောင်းပြီး ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ လူပဲ မငြင်းပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ပက်သက်ဖို့ မကြိုးစားချင်တာ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သူငယ်ချင်းလိုဖြစ်နေတယ် မဟုတ်လား'
'ဘာကြောင့်လဲတော့မသိဘူး အစ်ကိုက အဲဒီလိုပတ်သက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ရင်တောင် ငြင်းဖြစ်မယ်မထင်'
'ကျွန်တော် အိနြေ္ဒတွေထိန်းမနေပါဘူး၊ ပြီးတော့ အမျိုးသားနှစ်ယောက်အကြား ဘာတွေဖြစ်နိုင်မလဲ ဘယ်လိုခံစားချက်တွေရှိလဲ သိချင်မိ ပါသေးတယ်'
'အဲဒီ့ခံစားချက်ကို စမ်းသပ်ကြည့်ဖို့ဆိုရင် သင့်တော်မယ့်လူက အစ်ကိုကလွဲပြီး မရှိနိုင်ဘူးထင်တာပဲဗျာ' ကျွန်တော်အဲဒီစကားလုံးတွေ ကြားမိပြီးနောက်မှာ ဓာတ်မီးကိုင်ထားရာကနေ လွတ်ကျသွားမိရပါတယ်။
စကားလုံးတွေကို ကြာရှည် သူ အဆုံးမသတ်တော့ဘဲ နှာခေါင်းနှင့် ဘောင်းဘီတိုဝတ်ထားသော ကျွန်တော့်ပေါင်ကြားက ငပဲမာမာဆီ တိုး ကပ်လိုက်ပါတယ်။ 'ညီ ဘာလုပ်ရမလဲ မသေချာဘူး။ ဒါပေမဲ့ အစ်ကိုသင်ပြတာမှန်သမျှ ပြောတာမှန်သမျှ လုပ်ဖို့အသင့်ပါပဲ' ကျွန်တော် သူ့လက်မောင်းရင်းတွေကနေ ဆွဲထူလိုက်ကာ မတ်တပ်အနေအထားဖြစ်စေရင်း အမေးစကားဆိုလိုက်ရပါတယ်။ 'ဒီကိစ္စက မင်းဘာလုပ် ချင်တယ်ဆိုတာမျိုး သေချာရဲ့လားညီ' သူ ဦးခေါင်းကို အသာဆတ်ပြရင်း 'ဟုတ်ကဲ့'ဆိုတော့ ကျွန်တော် သူ့ပါးပြင်ကို အနမ်းချွေမိရတာ ပေါ့။ ကျွန်တော့်မျက်ဝန်းများကို သူ့မျက်လုံးပြာကြီးများဖြင့် ပြန်စိုက်ကြည့်ရင်း 'အဲဒီနေရာက အစ်ကိုနမ်းချင်တဲ့နေရာလို့ ရည်ရွယ်ထား တာလား?' တဲ့။ ဒီတော့လည်း ခပ်ဖူးဖူး သူ့နှုတ်ခမ်းအစုံကို နုညံ့စွာ နမ်းမိရတာပေါ့။
ဒီအချိန်မှာတော့ သူ့လက်အစုံဟာ ကျွန်တော့်ခန္ဓာကိုယ်ကို ပွေ့ဖက်လိုက်ရင်း ကျွန်တော့်ကို ပြန်လည်နမ်းရှိုက်ပါတော့တယ်။ သူ့လျှာ ဖျားဟာ ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းသားတွေထဲ တိုးဝင်လာတာကို ခံစားမိရပြီး လျှာတစ်ခုလုံးကိုသာမက အာခံတွင်းအနှံ့တို့ထိတာကို ခံစား ရသပေါ့။ သေချာတာကတော့ သူဟာ အနမ်းကျွမ်းကျင်သူတစ်ယောက်ပါပဲ။ သုံးမိနစ်လောက် နှစ်ဦးသား နှုတ်ခမ်းအစုံကို သော့ခတ်ထား မိကြတယ်။
ကျွန်တော် ဇော်နိုင်ရဲ့လက်ကို ဆွဲပြီး ရေချိုးခန်းထဲ ဦးဆောင်ခေါ်ငှင်ခဲ့ပါရဲ့။ သူ့အပေါ်ဝတ်အင်္ကျီကိုခေါင်းပေါ်ကနေ ဆွဲချွတ်ပေးလိုက် သလို သူ့ဘောင်းဘီကိုလည်း ခြေချင်းဝတ်အထိဆွဲချလိုက်တယ်။ သူ့ငပဲရဲ့ ကွမ်းသီးခေါင်းကို အသာတို့ထိရင်း အရွယ်အစားကို ကြည့် မိတာ ထင်ထားတာထက် ပိုရှည်ပြီးထွားတာပဲ။ ၆လက်မထက်ကျော်မယ် ပျော့နေစဉ်မှာတောင်။ ဇော်နိုင် သူ့ခြေချင်းဝတ်က ဘောင်းဘီ တိုနှင့် ရှူးဖိနပ်ကို ကုန်းပြီးချွတ်လိုက်တယ်။ ပြန်ပြီးမတ်တပ်ရပ်စဉ်မှာတော့ ရေပန်းခလုပ်ကို ဖွင့်လိုက်ကာ လှပတဲ့ သူ့ခန္ဓာကိုယ်ကို ရေစို စေတော့တာ။ ကျွန်တော်လည်း အ၀တ်တွေကို အမြန်ဆွဲချွတ်လိုက်ရင်း ရေပန်းအောက်က သူ့ဆီချဉ်းကပ်လိုက်တာပေါ့။ ရေချိုးခန်းတံခါး ကို အသာဆွဲပြီး ပိတ်ခဲ့ပါတယ်။ သူက တဗြန်းဗြန်းကျနေတဲ့ ရေပန်းကို ကျောပေးပြီး ရပ်နေတာမှာ ကျွန်တော်က ဆပ်ပြာမွှေးတစ်တုံးကို လှမ်းယူလိုက်ရင်း သူ့ရဲ့ ရင်အုပ်ကြီးကိုပွတ်သပ်ပေးနေမိပါတယ်။ နည်းနည်းမာနေတဲ့ သူ့နို့သီးခေါင်းများဆီအရောက်မှာတော့ ကျွန်တော့်လက်ချောင်းလေးတွေနှင့် ခပ်ရွရွပွတ်သပ်မိပါရော။ ဇော်နိုင်...မျက်စိအစုံကိုပိတ် မတ်တပ်ရပ်ရင်း ကျွန်တော့်ထိတွေ့မှုမှာ သာယာပါတယ်။ ချောမွေ့တဲ့ abs ကနေ သူ့ဆီးစပ်ဝန်းကျင်ကိုလည်း တဖြည်းဖြည်းလျောဆင်းပွတ်သပ်တာပေါ့။ သူ့ငပဲ တဖြည်းဖြည်း နဲ့ မာတောင်ပြီး ရမ်းလာတာကိုကျွန်တော်မြင်နိုင်ပါပြီ။ ကျွန်တော့်လက်အစုံဟာ ဆပ်ပြာမြှုပ်ဖြင့် ဖွေးဖွေးလှုပ်ရင်း သူ့ငပဲပတ်ဝန်းကျင်ကို ကစားမိပါတယ်။ သူ့ရွှေဥတွေဆီလည်းရောက်မိရရင်း အသာပွတ်သပ်မိသပေါ့။
ဇော်နိုင့် နှုတ်ဖျားက ညည်းတွားသံသဲ့သဲ့ ထွက်လာတာကြောင့် ကျွန်တော့်လက်အစုံဖြင့် ထိတွေ့မှုမှာ သူကြိုက်နှစ်သက်စပြုလာပြီဆိုတာ ပြောနိုင်ပါတယ်။ သူ့တင်ပါးအစုံကလည်း လှုပ်ရမ်းကာ ကျွန်တော့်လက်ချောင်းတွေထဲ အထုတ်အသွင်းစတင်ပြုလာတာမှာ သူ့ငပဲဟာ အစွမ်းကုန်မာတောင်လာပါပြီ။ အဲဒီငပဲက အခုတော့ ၇လက်မနီးပါး အတုတ်ကလည်း ထွားတာများ ကွမ်းသီးခေါင်းက ကြိုးဖုထုံးကြီးတစ်ခု လိုပါပဲ။
ကျွန်တော်သူ့ကို ရေပန်းဘက်ကိုလှည့်စေကာ ဆပ်ပြာမြှုပ်တို့ကို တစ်ပြိုင်နက်တည်းသန့်စင်စေလိုက်ပါတယ်။ သူ့နောက်ပိုင်း ကြွက်သားတွေကိုလည်း ဆပ်ပြာမြှုပ်များဖြင့် ပွတ်သပ်ပေးကာ တင်ပါးများကိုလည်း ပွတ်သပ်ကစားမိတာပေါ့။ သူ့တင်ပါးတွေက လုံးဝန်း ပြီးကျစ်နေသလို ပေါင်တံများကလည်း ဘောလုံးအားကစားသမားတစ်ယောက်လိုဖြစ်နေပါရဲ့။ သူ...လက်အစုံကို နံရံမှာ တိုးကပ်ရင်း ရင်အစုံကိုလည်း ဖိကပ်ကာ တင်ပါးများကိုတော့ ၀င့်ဝင့်ကြွားစေတယ်။ တင်ပါးဖြိုးအိအိတွေကို ဆပ်ပြာမြှုပ်များဖြင့် ပွတ်သပ်ဖိညှစ်ရင်း လက်ချောင်းများဖြင့် တင်ပါးအကွဲကြောင်းတလျှောက် ပွတ်သပ်မိပါရော။ ခရေ၀တွေထဲ လက်ချောင်းဖြင့် ပွတ် သပ်ဖိနှိပ်ပေးတော့ သူ့ တင်ပါးတွေကို ပိုမိုနောက်ဆုတ်ရင်း သာယာပါတယ်။
ဇော်နိုင် တစ်ယောက် ကျွန်တော်ပြုမူနေတာတွေကို ဒီထက်ပိုမိုလာပြီဆိုတာ ကျွန်တော်ပြောနိုင်ပါပြီ။ ကျွန်တော်ရေပန်းတွေဘက် သူ့ကို နောက်ပြန်ခိုင်းစေရင်း သန့်စင်စေလိုက်တယ်။ ရေများဖြင့် သန့်ရှင်းနေတဲ့ ငပဲငေါက်တောက် ကျွန်တော့်ရှေ့ရောက်လာတော့ ဒူးအစုံကို သူ့ရှေ့ကိုထောက်လိုက်ပါတယ်။ လှပထွားကြိုင်းလှတဲ့ ငပဲကြီးက တစ်ခုခုပြုလုပ်ဖို့ လှုံ့ဆော်နေသလိုပါပဲ။ ကျွန်တော်လည်း ပါးစပ်ကိုဖွင့် သူ့ကွမ်းသီးခေါင်းကို နှုတ်ခမ်းလွှာတွေထဲ ညှပ်လိုက်ပါတယ်။ ဇော်နိုင်လေ.... အိမ်နီးချင်းတွေ အလန့်တကြားဖြစ်လောက်အောင် အော် ညည်းအသံထွက်တာ ကျွန်တော့်အိမ်က အသံလုံလို့တော်သေးရဲ့။ ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းလွှာတွေထဲ လှည့်ပတ်ကစားရင်း အာခံတွင်းထဲထိ သွင်းပြီး ကစားပါသေးတယ်။ အရာအားလုံးပြည့်စုံလှပတဲ့ ကောင်ချောလေးရဲ့ ငပဲကို အားပါးတရ စုပ်မျိုနေမိခြင်းလေ။
ဇော်နိုင့် အသက်ရှူသံဟာ ပိုမိုပြင်းထန်လာပါပြီ။ ကျွန်တော်ပြောနိုင်တာက သူ့အမြှောက်တံကြီးက ပေါက်ကွဲပစ်ခတ်ဖို့ ကျည်ဆန်လောင် စာက အသင့်ဖြစ်နေပြီဆိုတာ။ ကျွန်တော်ကတော့ သတိမထားမိသလို ပြုမူရင်း ဆက်လက်စုပ်မှုတ်နေလိုက်ပါတယ်။ဇော်နိုင် ခင်မျာ..... 'အစ်ကို....ညီ...အစ်ကို့ပါးစပ်ထဲ ပန်းထွက်မိလိမ့်မယ်..' တဲ့။ ကျွန်တော် တုန့်ပြန်စကားမဆိုဘဲ ဆက်ပြီး ပြုစုနေလိုက်တယ်။ သူ့ခန္ဓာ ကိုယ် တဆတ်ဆတ်တုန်ခါလာသလို နှုတ်ဖျားက 'ပြီး....ပြီးပြီး.....အခုပြီးပြီ....အား...အ... ရပ်တော့အစ်ကို...ပါးစပ်ထဲပန်းထည့်မိလိမ့် မယ်လေ...' အော်ပါရဲ့။ ကျွန်တော်ဘာမှမပြောဘဲ ခပ်မျှဉ်းမျှဉ်းဆက်စုပ်နေလိုက်တာ အာခံတွင်းထဲပြည့်လျှံသွားအောင် သူ့ခါးကိုကော့ ကော့ပြီး ပန်းထည့်ပါတော့တယ်။ ကျွန်တော့် ဦးခေါင်းကို အသာထိန်းကိုင် သူ့ငပဲကို အပြင်ဆွဲထုတ်ဖို့ကြိုးစားရင်း၊ အရှိန်မသေသေးတဲ့ ပန်းထုတ်မှုကို ဆက်ပြုတယ်။ နောက်ဆုံးတော့ ကျွန်တော့် နှုတ်ခမ်းထောင့်မှာ ချောင်းငယ်တစ်ခုလို စီးဆင်းပြီပေါ့။
ဇော်နိုင် ကျွန်တော့်ဦးခေါင်းကို ဖျစ်ညှစ်ထိန်းကိုင်မိနေရာက ခဏဖြေလျော့လိုက်ပြီး ပျော့သွားစပြုနေတဲ့ သူ့ငပဲကို ကျွန်တော့်ပါးစပ် အတွင်းမှ ဆွဲထုတ်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်သူ့တင်ပါးတွေကို ဖျစ်ညှစ်လိုက်ရင်း ကောင်းလိုက်တာ လို့ပြောမိရပါတယ်။ သူ.... ကျွန်တော့် ပခုံးအစုံကို ဆွဲထူ မတ်တပ်ရပ်စေရင်း ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းကိုနမ်းတာပေါ့နော်။ ပြီးတော့ ကျွန်တော့်ပါးပြင်မှာပေကျံနေတဲ့ သူ့ကိုယ်ပိုင် သုတ်ရည် ငံကျိကျိကို လျှာဖျားဖြင့် အသာလျက်တယ်။
နှစ်ဦးသား ရေချိုးသန့်စင်ပြီးချိန်မှာတော့ ဇော်နိုင်က ညီ သိသွားပြီ ဒီလိုဖြစ်ပျက်ကြတယ်ဆိုတာ၊ 'ညီက...အစ်ကို့အတွက် ကျေနပ်မှုဒီ ထက်ပေးသင့်တာပေါ့ ဟုတ်လား' တဲ့။ ကျွန်တော်ကလည်း သူ့ကိုပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်တာက သိပ်အဓိကမကျပါဘူးလို့။ ဒါပေမဲ့ သူအမှန်တကယ် အလေးအနက်ပြောတယ်ဆိုရင်တော့ အနည်းဆုံး ကျွန်တော့်ကိုပြန်ပြီး -ွင်းထုပေးသင့်တာပေါ့ဆိုတာကိုပါ ပြောလိုက် တာ။ စကားလုံးအဆုံး သူ ကျွန်တော့်ရဲ့ မာထောင်နေတဲ့ ငပဲကို သူ့လက်ဖြင့် ဆွဲကိုင်ရင်း -ွင်းထုပေးပါရော။ အစကတည်းက စိတ်လှုပ် ရှားနေရတာရော သူ့လက်ကစားကျွမ်းကျင်မှုကြောင့်ပါ climax ဖြစ်လာနေပြီမို့ရပ်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်။ သူက ကျွန်တော်ပြုမူခဲ့တဲ့အတိုင်း ဒူး ထောက်လိုက်ကာ ငပဲတစ်ချောင်းလုံးသူ့အာခံတွင်းထဲသွင်းလိုက်ပြီး ပြုမူပေးခဲ့တဲ့ ကျွန်တော့်လှုပ်ရှားမှုအတိုင်း လုပ်ဆောင်ပါတော့ တယ်။ သူ့ပါးစပ်ထဲ အားရပါးရပန်းထည့်လိုက်တာပါ။ အဲဒါတွေကို အိမ်သာကြွေကမုတ်ထဲ ထွေးထုတ်ဖို့ကြိုးစားတာကို ကျွန်တော်အစ ကမြင်ရ ပေမဲ့ နောက်တော့ သူမျိုချပစ်လိုက်ပါရော။
ဇော်နိုင် သူ့ပင်မအလုပ်ဆီပြန်သွားဖို့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ ပြုမူမှုတွေဟာ သူ့အတွက်ချီတုံချတုံ မဖြစ်ခဲ့ရပါဘူးလို့ ဆိုသေးရဲ့။ ကျွန်တော်သိတယ် သူနှင့် ဒီလိုပတ်သက်ခွင့်ရတဲ့အမျိုးသားဆိုတာ ကျွန်တော်တစ်ဦးထဲဖြစ်မှန်း။ အချိန် တွေ ကြာလာတဲ့အခါမှာလည်း ကျွန်တော်ဟာ သူနှင့် လိင်တူဆက်ဆံခဲ့တဲ့အမျိုးသားတစ်ဦး သို့မဟုတ် ဆက်ဆံလိမ့်ဦးမယ့် တစ်ဦးတည်း သော အမျိုးသားဆိုတာ သိလာရပါတယ်။
Alex Aung ( 18-2-2011)
စာကြွင်း ။ ။ တကယ့်ကိုတောင့်ဖြောင့်သလို ရုပ်ရည်ချောမွေ့သူ 'ဇော်နိုင်'ဆိုတာ တကယ်ရှိခဲ့ပါတယ်။ နာမည်ရင်းကိုတော့ ပြောင်း ပေးထားရတာပေါ့နော်။ သူက ပါ။ ဒါပေမဲ့ သူ သင့်အိမ်ထဲကိုဝင်ရောက်လာတာနဲ့ နွေးထွေးတဲ့ ပွေ့ဖက်မှုနဲ့ gay တွေကို ရင်းနှီးစွာ ခင်မင် ဆက်ဆံတတ်သူတစ်ဦးပေါ့။ ရေးသားခဲ့တဲ့ story တစ်ခုလုံးဟာ အထူးတဆန်းစိတ်ကူးမိတဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့တွေးတောမှုသက်သက်သာဖြစ် ပါတယ်။
Posted by Alex Aung at 12:43 PM2comments:
ကျွန်တော့်ပထွေးက ရဲအရာရှိတစ်ယောက်ပါ။ စံပြအားကျရတဲ့ တစ်ယောက်ပေါ့ ကျွန်တော့်အတွက်လေ။ ဦးရဲလွင်ဟာ ကျွန်တော်တို့ မိသားစုဝင်ဖြစ်ခဲ့တာ ကျွန်တော့်အသက် ၁၀နှစ်ကတည်းကပါပဲ။ သူဟာ အရပ်မြင့်မြင့်၊ အသားညိုညို၊ ၆ပေ၂လက်မနှင့် ပေါင် ၂၀၀ လောက်ရှိမယ်။ အလွန်ကြံ့ခိုင်တဲ့ ခန္ဓာကိုယ်မှာကြွက်သားတွေအပြည့်ဆိုရလောက်အောင် ကြံ့ခိုင်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းတွေ အပြင်းအထန် လုပ်သူ။ များသောအားဖြင့် အရပ်ဝတ်ဖြင့် စုံစမ်းစစ်ဆေးတဲ့အလုပ်ကို အဓိကလုပ်ပါတယ်။ သူ့မှာရှိတဲ့ ရဲဝတ်စုံယူနီဖောင်းကို ၀တ်လိုက် တဲ့အချိန်များဆို အလွန့်ကိုကြည့်ကောင်း ယောက်ျားပီသတာဗျ။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော် အဲဒါကို ဘယ်တုန်းကမှ မပြောပြခဲ့ဘူး သူ့ကို။ ပြော လို့လဲ မဖြစ်ဘူးလေ ကျွန်တော့်အတွေးထဲ သူဟာ လိင်သင်္ကေတတစ်ခုအဖြစ် တွေးထင်မှုကပိုခဲ့တာဆိုတော့။
ကျွန်တော်သူ့ကို အားကျနေတယ်ဆိုတာ သူသိတယ်။ သူနှင့်အတူ လေ့ကျင့်ကစားရင်း ကျွန်တော့်ခန္ဓာကိုယ်ဟာ ဖွံ့ဖြိုးကြီးထွားလာတာ တဖြည်းဖြည်းပေါ့။ သူ မကြာခဏ ကျွန်တော့်ကိုပြောနေတာကတော့ သူ့လူကြီးလိုပဲ ကြည့်ကောင်းလာပြီတဲ့။ ဒါမှမဟုတ် သူ့လူကြီးလို တိုးတက်လာပြီ ပြောပြန်ရော။ အမြဲတမ်း သူ့ကိုယ်သူ ရည်ညွှန်းနေခြင်းလေ။ ကျွန်တော်တို့ကြားတော့ အထူးတလည် ပတ်သက် ဆက်နွယ်မှုမျိုး မရှိခဲ့ကြပါဘူး။ သူ့ ခန္ဓာကိုယ် သူ့ရုပ်ရည်တွေကို အားကျရကောင်းမှန်းသိချိန်မှာမှ သတိပြုမိတယ် မြင်ဖူးသမျှ အမျိုးသား တွေထဲ ဦးရဲလွင်ဟာ အတော်ကြည့်ကောင်းသူဆိုတာ။ ကျွန်တော့်ဆံနွယ်တွေက အညိုရင့်ဖြစ်ပေမဲ့ သူ့ဆံပင်တွေက အနက်ရောင်စစ် စစ်။ နှစ်ယောက်သား ခန္ဓာကိုယ်ပုံရိပ်တွေက mold တစ်ခုထဲနှင့် ပုံသွင်းထားသူများလို ဆင်တူလာပါပြီ။
ကျွန်တော်တို့ဟာ ခင်မင်ကျွမ်းဝင်သူ၊ ပြီးတော့ သူငယ်ချင်းကောင်းတွေလည်း ဖြစ်ပြန်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ထူးထူးခြားခြား နီးကပ်သူများ တော့ မဟုတ်ခဲ့တာ အခု၁၀ကျော်သက်ရွယ်ထိ လို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်။ ဖခင်ကောင်းတစ်ယောက်က သားတစ်ယောက်ကို လိုအပ်တဲ့ ထောက်ပံ့မှု၊ လမ်းညွှန်မှုတွေကို အပြည့်ဝဆုံးပေးသလိုမျိုး ကျွန်တော်လိုအပ်ချိန်တိုင်း သူအဆင်သင့်။ ကျွန်တော် အသက်၁၈နှစ်ပြည့်ချိန် မှာ မာမီနှင့် ဦးရဲလွင်တို့က သူတို့နှင့် တစ်ခန်းထဲနေရာက အခန်းကျယ်တစ်ခုကို ကျွန်တော်ပြောင်းနေဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ အိမ် အနောက်ဘက်ခြမ်း ကားဂိုထောင် အပေါ်ထပ်ကအခန်းပေါ့။ သူတို့နှင့် နည်းနည်းလှမ်းတဲ့ နေရာလေ။ ကျွန်တော်တွေးမိရတာက ဆယ်ကျော်သက်ကျွန်တော်လွတ်လွတ်လပ်လပ် နေချင်မှန်း၊ ပြီးတော့ သူတို့အိမ်ထောင်ရေး လွတ်လပ်ခွင့် ပိုရချင်တာလည်းပါမယ်ထင် တယ်။ ကားဂိုထောင် အပေါ်ဘက်က အခန်းက အကြမ်းထည်ပဲရှိသေးရဲ့။ ဆေးသုတ်ဖို့၊ ပစ္စည်းတွေ နေရာချထားဖို့ လိုသေးတာ။ မှတ်မိ သလောက်က မာမီ့ အ၀တ်ချုပ်လုပ်ငန်းက ပစ္စည်းတွေထားတဲ့ စတိုခန်းဖြစ်ခဲ့တယ်။ များသောအားဖြင့်တော့ ပစ္စည်းသေတ္တာတွေ၊ ပရိ ဘောဂ မသုံးတော့တာတွေပါ။ ရက်ရှည်ကျောင်းပိတ်ရက်ရတော့ ကျွန်တော်နှင့် ဦးရဲ ကျွန်တော့်ပစ္စည်းတွေ အခန်းသစ်မှာ နေရာချဖို့ အိမ်မှာနေရစ်ခဲ့ကြတယ်။
ခပ်စောစောလေး မနက်စာစား ပစ္စည်းတွေ၊ ခုတင်တွေကို ဘယ်လိုနေရာချကြမယ်ဆိုတာ တိုင်ပင်ကြပြီး စတင်လှုပ်ရှားလိုက်ကြတာ တနေကိုကုန်ရော။ ညနေစောင်းမှာတော့ ကြီးမားကျယ်ပြန့်တဲ့ အခန်းလစ်ခုကိုရပါတယ်။ အခန်းထောင့်မှာတော့ မှန်ချပ်အကြီးကြီးကို Slide တံခါးအဖြစ်လုပ်ထားတဲ့ အ၀တ်ဘီရိုကြီးထဲရှိတဲ့အ၀တ်ဟောင်းတွေရှင်းဖို့ကျန်သေးတယ်။ ဦးရဲက ဒီဘီရိုကြီးရှင်းပြီးရင်တော့ ကိစ္စပြတ် ပါပြီလို့ ပြောတာပါပဲ။ အ၀တ်တွေကို ထုတ်ပိုး ဂိုထောင်ထဲသွားထည့်၊ ပြီးတော့ ကျွန်တော်နေမယ့် အခန်းဆီပြန်လာတော့ ဦးရဲက ရဲယူနီဖောင်း တစ်စုံကိုကိုင်ပြီး ရပ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ နှစ်များစွာကြာခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ ၀တ်စုံတစ်စုံဖြစ်မှာ။ သူ...ကျွန်တော့်ကို ပြုံးပြပြီး အဲဒီ ၀တ်စုံကိုပြ သူ့ဦးဆုံးဝတ်ဆင်ခဲ့တဲ့ ယူနီဖောင်းဖြစ်ကြောင်း ပြောပြတာပေါ့။ ဒီဝတ်စုံကို ၀တ်ဆင်တုန်းက ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကြည့်ကောင်း တယ်လို့ ခံစားခဲ့ရသတဲ့။ ဒါဆို ကျွန်တော့်ကို ၀တ်ပြပါလားဆိုတော့ သူ အခုချိန်မှာ ၀တ်စုံနှင့် Fit ဖြစ်ဖို့ မသေချာတော့ ဘူးပြောပြီး ကျွန်တော့်အလိုကို လိုက်ပါတယ်။
သူ့ရှပ်အင်္ကျီနှင့် ဘောင်းဘီရှည်တို့ကို အသာချွတ်လိုက်တာအခုတော့ အဖြူရောင် brief ဘောင်းဘီတိုလေးသာ သူ့ကိုယ်ပေါ်မှာရှိ တော့တယ်။ 'ဦးတော့ မထင်ဘူ ညီဇော် ဒါပေမဲ့ စမ်းဝတ်ကြည့်ကြတာပေါ့' ချိတ်က အင်္ကျီကိုဖြုတ်ပြီး လက်လျှိုလိုက်ကာ ကြယ်သီးတွေ တပ်ဖို့ ကြိုးစားတာမှာ လုံးဝအဆင်မပြေ။ သူ သဘောတကျရယ်မောကာ ဘောင်းဘီရှည်ကိုလည်း ၀တ်ဖို့ကြိုးစားပြန်တယ်။ ဟပြဲ ဖြစ် နေတဲ့ ရင်ဘတ်မှာ အမွှေးနုတချို့ဖုံးလွှမ်းလျက် သန်မာတဲ့ကြွက်သားကြီးတွေက နေရာယူထားတာကိုး။ ဘောင်းဘီကျတော့လည်း အခု ခါးဆိုဒ်က ယူနီဖောင်းဘောင်းဘီရဲ့ခါးဆိုဒ်ထက်ကြီးနေရော။ အဲဒါနဲ့ အ၀တ်တွေကို ပြန်ချွတ်လိုက်ပြီး ကျွန်တော့်မျက်ဝန်းတွေကို စိုက် ကြည့်ကာ 'ညီဇော် ဒီဝတ်စုံက မင်းနဲ့ဆို အံကိုက်ဖြစ်မှာသေချာတယ် ၀တ်ကြည့်ပါလား' တဲ့။ ကျွန်တော်လည်း 'ကောင်းပြီ'လို့ ဆိုလိုက်ပြီး ကျွန်တော့် ဂျင်းဘောင်းဘီနှင့် တီရှပ်တို့ကို မြန်မြန်ချွတ်ကာ ခုတင်ပေါ်တင်လိုက်တယ်။ ယူနီဖောင်းဘောင်းဘီထဲ ခြေထောက်တွေကိုလျှို၊ ပြီးတော့ ရှပ်အင်္ကျီတွေကို ကြယ်သီးတပ်လိုက်တာနဲ့ အဆောတလျင် သိလိုက်ပါပြီ ကျွန်တော့် ကိုယ်ခန္ဓာမှာ ရာဘာလက်အိပ်စွပ်ထား သလို fit ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ။ ကျွန်တော် ဘောင်းဘီ ခါးပတ်ခေါင်းကို အမြန်ချိတ် မှန်ချပ်ထဲ ကိုယ့်ဖာသာ ဘယ်လိုနေလဲ ကြည့်ရတာ ပေါ့။ ဦးရဲက ၀တ်စုံသပ်သပ်ရပ်ရပ်ဖြစ်အောင် ကူညီပေးရင်း ကျွန်တော့်တင်ပါးတွေကို ပွတ်သပ်ကာ 'ညီဇော့် တင်ပါးတွေက တင်းနေ တာပဲ' ပြောရဲ့။ ကျွန်တော့် ခန္ဓာကိုယ်ကို ရှုထောင့်မျိုးစုံက ကြည့်ပေးပါတယ်။
ကျွန်တော်က ဘာဆိုလိုမှန်း သဘောမပေါက်ဘူး ဖြစ်နေတယ်။ သူက အားရပါးရပြုံးလိုက်ပြန်ကာ 'ကဲ...ဦးရဲပြမယ်' ဆိုပြီး ဘောင်းဘီ ချိတ်ကိုဖြုတ် ဇစ်ကိုအောက်ဆွဲချကာ အထုပ်အထည်ဖြစ်နေတဲ့ ရွှေဥတွေကို အနေအထားပြင်ပေးပါတယ်။ ပြီးတော့ ဘောင်းဘီဇစ်ကိုပြန် ဆွဲတင်ပေးကာ မှန်ကိုပြန်ကြည့်ခိုင်းတာပေါ့။ 'တွေ့လား....ဒါမှဘောင်းဘီက ချုပ်ထားတဲ့အတိုင်း မင်းနဲ့အံကိုက်ပဲ' ။ နှစ်ယောက်လုံး ကျွန်တော့် ပေါင်ခွဆုံကို အာရုံစိုက်ပြီးကြည့်နေကြတာမှာ ကျွန်တော့်စိတ်တွေသောင်းကျန်းပြီး ပေါင်ကြားက ညီဘွားက မာတောင်လာ တယ် ဂရုမထားလို့မရအောင်။ ကျွန်တော့် ရှက်စိတ်တွေ ၀င်လာပေမယ့် ဘာမှမပြောဖြစ်ပါဘူး။ မာတောင်လာတဲ့ ငပဲပြန်ပြီး နေသားကျ သွားဖို့ပဲ ဆန္ဒပြုမိပါတယ်။ ဦးရဲရဲ့ရှေ့မှာ သိပ်ပြီး မရှက်ချင်ဘူးဗျာ။ ဒါပေမဲ့ ဒီကိစ္စက သိသိသာသာကြီး သတိပြုမိလောက်အောင်ဖြစ်လာ တာ။ သူက အဲဒါကိုကြည့်ရင်း မျက်နှာမှာ အပြုံးတွေပိုလာတယ်။
'တစ်ယောက်ယောက်က ငါ့ငပဲနှင့် ရွှေဥတွေကို ဒီလိုကိုင်ပြီး ပြန်နေရာချပေးရင်ဖြစ်တာပါပဲ ဦးရဲလဲ။ မင်းဘောင်းဘီကိုချွတ်ပြီး လွတ်လွတ်လပ်လပ်ဆက်ကြီးခွင့်ပေးလိုက်စမ်းပါ ညီဇော်ရာ'
ကျွန်တော့်ပထွေးဖြစ်သူနဲ့ အတွင်းကျကျ သို့မဟုတ် ဒီလိုရင်းရင်းနှီးနှီးအရင်က မဖြစ်ခဲ့ဘူး။ ဒါပေမဲ့ သူပြောတဲ့အတိုင်း ကျွန်တော်လုပ် လိုက်ပါတယ်။ ယူနီဖောင်း ဘောင်းဘီရှည်ထဲက ခြေထောက်တွေကို ထွက်လိုက်ပြီးတော့ အတွင်းခံပါးပါးမှာ ထွားသထက်ထွားကာ ခေါင်း ထောင်လာတဲ့ ကျွန်တော့်ငပဲကို ကြည့်ပြီး 'ညီဇော်ရ.....မင်းငပဲက ထွားသလို ဦးရဲ ပစ္စည်းကလည်းထွားတယ်' တဲ့။ သူဝတ်ထားတဲ့ အဖြူ ရောင်အတွင်းခံရဲ့အတွင်းမှ ခုန်းထနေတာကို ကြည့်ရင်း ကျွန်တော့်ငပဲ ဆိုဒ်နဲ့ စိတ်ထဲက ယှဉ်ကြည့်နေမိပါတယ်။ အဲဒါကို သူလည်းရိပ်မိ ဟန်တူပါရဲ့။ သူ့ရဲ့မျက်ဝန်းညိုကြီးတွေဖြင့် ကျွန်တော့်မျက်လုံးတွေစီ စိုက်ကြည့်ရင်း အနားကို တိုးကပ်လာတော့တယ်။
အဲဒီအချိန်လေးဟာ ကျွန်တော့်အသက် ၁၈နှစ်ပြည့်ချိန်လေးရဲ့ စိတ်လှုပ်ရှား အထကြွရဆုံး အခိုက်အတန့်လေးပါပဲ။
ဦးရဲတစ်ယောက် မလှုပ်မရှားရပ်နေတဲ့ ကျွန်တော့်နားတိုးကပ်သထက်ကပ်လာပြီး ဖောင်းကြွနေတဲ့ ပေါင်ကြားက အထုပ်အထည်ကို သူ့ လက်ဝါးကြီးနှင့် အုပ်ကိုင်လိုက်သလို ကျွန်တော့်လက်အစုံကိုလည်း သူ့ပေါင်ခြံဆီနေရာချပေးပါတော့တယ်။ 'အ၀တ်တွေအားလုံး မချွတ် ချင်ဘူးလား ညီဇော်?' သူခပ်တိုးတိုးလေး ကျွန်တော့်ကိုမေးလိုက်ပြီး သူကိုယ်တိုင်ကတော့ ၀တ်ထားတဲ့ဘောင်းဘီတိုကို ဒူးခေါင်းထိဆွဲချ။ ပြီးတော့မှ ခြေချင်းဝတ်ကတဆင့် ဖယ်ရှားပစ်တယ်။ မာတောင်ပြီး ထွားလှတဲ့သူ့ငပဲဟာ အပေါ်ကိုမတ်ထောင်နေတာများ အံစာတုံးလို ဖုထစ်နေတဲ့ သူ့ belly ကြွက်သားတွေနှင့် ထိကပ်တော့မတတ်။ နှစ်ယောက်သားပေါင်ကြားထဲက အမြှောက်ကြီးတွေကို မိုးပေါ်အတူချိန် ရွယ်ကြရင်း မျက်ဝန်းတွေက ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းတွေရဲ့ အရွယ်အစားနှင့် တပါးသူရဲ့ငပဲအရွယ်အစားကို နှိုင်းယှဉ်မိကြသေးတယ်။
'Damn....ညီဇော်....မင်းပစ္စည်းက ဦးရဲပစ္စည်းကို မှန်ထဲမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းပါလားကွ' ကျွန်တော် ကိုယ့်ဟာကိုယ်လည်း သိပါရဲ့ သူပြော တာမှန်တယ်ဆိုတာ။ သူ့ငပဲရဲ့မတ်ထောင်နေတာကို ကြည့်ရတာ ကျွန်တော့်ငပဲကို မှန်ထဲပြန်မြင်ရသလိုပါပဲလား။ သူ့ငပဲက ပိုကြီးပြီး ပိုတုတ်တယ်၊ ပြီးတော့ ရွှေဥတွေက ပိုပြီးလုံးဝန်းနေတယ်ဆိုတာ မေးခွန်းထုတ်စရာမလိုပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့ ပစ္စည်းတွေက တစ်ခုတည်းကလာတဲ့အတိုင်းတူနေရဲ့။
နှစ်ယောက်သား ကိုယ့်ပစ္စည်းကို လက်နှင့်ကိုင်ပြီး ခပ်ဖွဖွကစားကြရင်း တစ်ယောက်နှင့် တစ်ယောက်ပြနေကြတယ်။ ရိုးရိုးလေးပါ၊ အခြေ ခံနည်းလေးပါပဲ။ ကျွန်တော့်ဟာ ဘယ်လောက်ထွားတယ် ဘယ်လိုအခြေအနေရှိတယ်ဆိုတာ လက်နဲ့ကစားရင်း သူ့ကိုပြသလို သူက လည်း ထို့အတူပေါ့။ နံရံပေါ်က မှန်ချပ်ကြီးရှေ့ ဘေးချင်းယှဉ်ရပ် ကိုယ်စီ ဗုံတံခေါက်နေကြတာ စကားတောင်မပြောဖြစ်ကြဘူး။ ခဏနေ တော့ သူ့လက်ဟာ ကျွန်တော့်ငပဲကို အသာဆုပ်ကိုင်ရင်း ခပ်ဖွဖွပွတ်သပ် ကစားတယ်။ နဂိုထဲကမှ သွေးတွေဆူပွက်လာနေတာ သူ့ လက်ကစားမှုကြောင့် ကျွန်တော့်ငပဲကွမ်းသီးခေါင်းက အရည်ကြည်တွေရွှဲရွှဲစိုလာရော။ သူအရည်ကြည်လေးတွေကို လက်နှင့်အသာပွတ် ကြည့်နေပြီး နောက်မှာ ကျွန်တော့်ငပဲတစ်ချောင်းလုံးကို သူ့နှုတ်ခမ်းလွှာတွေမှတစ်ဆင့် အာခံတွင်းထဲ သွင်းထည့်လိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ပေါင်ကြားက မတ်ထောင်ပြီး ဟိုရိမ်းဒီရိမ်းကနေတဲ့ သူ့ကိုယ်ပိုင် ငပဲကိုလည်း ပွတ်သပ်သေးတော့တာ။ ဦးရဲရဲ့ နှုတ်ခမ်းတွေ လျှာတွေနှင့် ပြုစုနေမှုကို တကယ်သဘောကျရပါတယ်။ 'ညီဇော်....ဦးရဲ ဒစ်ကိုရော မကိုင်ချင်ဘူးလား' ဒီတော့ စကားဆိုရင်း မတ်တပ်ရပ်လာတဲ့ ဦးရဲ ငပဲကို ဖြည်းဖြည်းညင်သာ ကိုင်တွယ်ကြည့်မိတာပေါ့။ 'ညီဇော်...... နှစ်ချောင်းလုံးကို ပူးကိုင်လိုက် ဘယ်သူ့ဟာက ပိုကြီးလည်း ကြည့်ရ အောင်' နှစ်ယောက်လုံးသိနေတာပဲ သူ့ဟာကပိုကြီးတယ်ဆိုတာ။ မတ်တပ် မျက်နှာခြင်းဆိုင်ရပ် ငပဲနှစ်ချောင်းကို ပူးကိုင်ပြီး အသာလှုပ် ရှားကစားပါတယ်။ ကျွန်တော့်ကိုယ်ခန္ဓာကို သူ့ဆီဆွဲယူပြီး ပွတ်သပ်လိုက်သေးတာလေ။ 'ဦးရဲ....ကျွန်တော်ပြီးချင်လာပြီဗျ'
သူ အားရပါးရပြုံးလိုက်ကာ 'လုပ်ပေါ့ကောင်လေးရ' လို့ပြောတော့ ကျွန်တော်လည်းထိန်းထားတာကို လွှတ်လိုက်တာ သူ့ငပဲပေါ်ရော ဗိုက်ကြွက်သားတွေပေါ်ပါ ရွှဲရွှဲစိုသွားအောင် ပန်းထည့်ပစ်လိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော် သူ့ရှေ့ကနေခွာလိုက်ကာ အသက်ရှူမှုပြင်းပြင်းပြပြနဲ့ ခုံအလွတ်တစ်ခုမှာ ထိုင်လိုက်ပါတယ်။ သူကတော့ ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းပေါ် စိုရွှဲနေတဲ့ ကျွန်တော့်သုတ်ရည်တွေကို ချောဆီသဖွယ်ပွတ်သပ်ပြီး သကာလ ဆက်လက် -ွင်းထုတော့တာ။ မှန်ချပ်တွေပါတဲ့ အ၀တ်ဘီရိုကြီးရှေ့ ခပ်တောင့်တောင့်အမျိုးသားတစ်ယောက် ငပဲထွားထွားကို ဆုပ်ကိုင်ပြီး အားရပါးရ -ွင်းထုနေတာ ကျွန်တော့်စိတ်ထဲ တစ်ခုခုနှင့် ညှို့ငှင်နေသလို အကြည့်က မလွှဲဖယ်နိုင်ပါဘူး။ အားရပါးရ သုတ် ရည်တွေ ပန်းထုတ်ပြီးပေမဲ့ မြင်ရတဲ့ မြင်ကွင်းမှာ သာယာပြီး ငပဲက အောက်မငိုက်ဘဲ မိုးပေါ်ထောင်မြဲ။ ဒါကို သူသတိထားမိဟန် ရှိပြီး ကျွန်တော့်ရှေ့တည့်တည့်လာရပ်က လှုပ်ရှားပြပါတယ်။ ကျွန်တော့်ပခုံးကို ဖိပြီး ဒူးထောက်စေကာ ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းနား သူ့ငပဲကို ချိန်ရွယ်ကစားတယ်။ ကျွန်တော်သိတယ် သူ ကျွန်တော့်ကို ဘာလုပ်စေချင်တယ်ဆိုတာ။ နှုတ်ခမ်းလွှာများကြားအသာဖိကပ်တိုးပေး တော့ ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာ မသေချာသေးဘူးလို့ သူ့ကိုပြောလိုက်ပါရဲ့။ ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာသိတယ်၊ လုပ်လဲ လုပ်ချင်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ လုပ်ဆောင်ရမှာကို ကြောက်နေတယ်လို့ ဦးရဲ ထင်မြင်အောင် ဟန်ဆောင်ခဲ့ပါပြီ။
သူကတော့ သူ့ငပဲကို စုတ်မှုတ်ပေးဖို့အကြိမ်ကြိမ် အခါခါတောင်းဆိုချော့မော့တာပေါ့လေ။ နောက်တော့ ကျွန်တော့်နံဘေးက ကြမ်းပြင် ပေါ် ဒူးထောက်လိုက်ရင်း ကျွန်တော့်ကိုယ်ကို ဆွဲဖက်ကာ ကြမ်းပြင်ပေါ် လှဲအိပ်စေကာ သံချောင်းအလား မာတောင်နေတဲ့ ကျွန်တော့်ငပဲ ကို ပါးစပ်ထဲ အားပါးတရ စုပ်ယူလိုက်တယ်လေ။ ကျွန်တော် ရုတ်တရက် အော်မိတော့မလိုဖြစ်ပြီး သုတ်ရည်တွေ ကွမ်းသီးခေါင်းထိပ် ဆောင့်တက်လာသယောင်ခံစားရပါရဲ့။ ကြမ်းပြင်ပေါ်ကို လှဲနေတဲ့အနေအထားအရ သူနှင့်ကျွန်တော်ဟာ 69 အနေအထားဖြစ်လာတာမှာ သူ့ငပဲကြီးက အားရစဖွယ်နှုတ်ခမ်းနားကပ်ကပ်လာတာကြောင့် မထိန်းနိုင်တော့ဘဲ ဆွဲယူပြီး စုပ်မှုတ်တော့တယ်။ သူပြုစုပေးသလို ကျွန်တော်လည်း ဖွဖွလေးစုပ်လိုက် ကွမ်းသီးခေါင်းလေးကို လျှာဖျားလေးဖြင့် ရစ်ဝိုက်ကစားလိုက်လုပ်နေတာပေါ့ ခဏတာ။ မိနစ်အနည်း ငယ်အကြာမှာတော့ သူရုတ်တရက် ထရပ်လိုက်ကာ သူ့ဖာသာသူ ငပဲကိုခပ်သွက်သွက်ကစားရင်း ကျွန်တော့မျက်နှာနှင့် ခန္ဓာကိုယ်ပေါ် ရေပြွတ်နှင့် ဖြန်းသလို ပန်းပါတယ် အများအပြား။
ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာ အားလုံးအပေါ် ကျွန်တော်သိတာက စိတ်လှုပ်ရှားနေဆဲ ပေါင်ကြားကညီဘွားကလည်း အရှိန်မသေ ခေါင်းထောင်လျှက်ပါ။ ဦးရဲကတော့ သူ့ဖီလင် အဆုံသတ်ကို ကျွန်တော့်ရင်အုပ်ပေါ် နောက်ဆုံးတစ်စက်ချလိုက်ရင်း ရုတ်တရက် အခန်းပေါက်ဝဘက်လျှောက် သွားလိုက်ကာ အခန်းမီးကိုပိတ်ပစ်လိုက်ပါတယ်။ ဘာလုပ်တာ.....ဘာဖြစ်နေတာလည်းဆိုပြီး နည်းနည်းလန့်သွားမိပေမဲ့ အမှောင်ခန်း အတွင်း ကျွန်တော့်အဖြူရောင်အတွင်းခံကို စမ်းမိပါရဲ့။ မာနေဆဲ ငပဲကို အဲဒီဘောင်းဘီနဲ့ ၀တ်ပြီး ဆွဲဖုံးရတာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော့်ငပဲ က အရမ်းမာပြီးတောင်နေဆဲဆိုတော့ ဆက်မထိန်းချင်တော့ပဲ လက်နဲ့ခပ်သွက်သွက်ကစားပစ်လိုက်တယ်။ ရပ်တန့်လို့မှမရ....မရချင် တော့တာလေ။
ရုတ်တရက် အခန်းအမှောင်ထဲမှာ ဦးရဲတစ်ယောက် ကျွန်တော့်နံဘေးလှဲလျောင်းလိုက်ပြီး သန်မာတဲ့ သူ့လက်မောင်းတွေဖြင့် ကျစ်ကျစ် ပါအောင်ဖက်လိုက်ပါတယ်။ သူဆွဲဖက်ကတည်းက ကျွန်တော်လက်ကစားနေတာကိုရပ်လိုက်တာပါပဲ။ သူအဲဒီအချိန်ကစပြီး စကားတွေ အများကြီးပြောတော့တာ ကျွန်တော်သိပ်မမှတ်မိပါဘူး ဘာတွေပြောနေမှန်း။ ဒါပေမဲ့ သူကျွန်တော့်ကို တောင်းပန်ဖို့ကြိုးစားနေခဲ့ခြင်းနှင့် မလုပ်သင့်တဲ့အရာကို လုပ်ခဲ့မိတဲ့ သူ့အပြစ်တွေအတွက် ၀မ်းနည်းပါကြောင်းစတာတွေလည်းပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ နုညံ့ချိုသာတဲ့ သူ့စကားတွေကြား စိတ်ခုတဲ့စကားမဆို အလိုက်သင့်မျောပါနေတာဆိုတော့ စိတ်အမှတ်မရှိကြောင်း ပြရာရောက်သပေါ့နော်။ နှစ်ဦးသား ဆက်လက်ဖက်တွယ်ရင်း ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့ကိုယ်စီပွတ်သပ်မိကြတဲ့ ခဏ သူ့ပေါင်ကြားက ငပဲဖုဖုကို စမ်းမိချိန်မှာ ကျွန်တော် အောက် ဘက်ကို လျှောချ သူ့ငပဲကို နှုတ်ခမ်းတွေနှင့် ခပ်ဖွဖွနမ်းမိပါတယ်။ သူ့တုန့်ပြန်ချက်ကလည်း မိုက်ပါတယ် သူ့ဘောင်းဘီကိုလျှောချပြီး ငပဲကို ကျွန်တော် အာခေါင်ထဲထိ တဆုံးထည့်ခွင့်ပြုပါတယ်။ နှစ်ဦးသား စည်းချက်ညီညီပေါ့။
'ညီဇော်.....ဒီလိုကိစ္စမျိုးကိုအချိန်တိုင်း ဦးရဲမလုပ်ဘူး။ ဦးရဲဘ၀မှာ အကြိမ်အနည်းငယ်လောက်ဘဲ ရှိခဲ့တာ။ ဦးရဲဆိုလိုတာက ဒါဟာ ပထမ ဆုံးအကြိမ်မဟုတ်သလို အချိန်တိုင်းလိုလို မလုပ်ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်။ ဦးရဲမှာ အဲဒီလိုလုပ်ဖို့ ဘော်ဒါအချို့ရှိတယ်။ တချို့တွေကိုတော့ ညီဇော် သိချင်သိမှာပါ။ ဒါပေမယ့် နေ့တိုင်းမတွေ့ဖြစ်....ပြီးတော့'
သူ့စကားလုံးတွေနှင့် ရှင်းလင်းဖို့ကြိုးစားရင်း ဆက်မပြောဘဲ ရပ်လိုက်တယ်။ ဒီတစ်ခါတော့ ကျွန်တော်ပြုံးပြတဲ့အလှည့်ပေါ့။ 'ဦးရဲရေ... သားလည်း ဒီလိုလုပ်တာ ဦးဆုံးမဟုတ်သလို အများကြီးတော့လည်း မဟုတ်ဘူးဗျ။ ကျွန်တော်နှင့် တတွဲတွဲဖြစ်တဲ့လူတွေကို ဦးရဲလည်း သိမယ်ထင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ sexy အဖြစ်ဆုံးလူတစ်ယောက်နှင့်တော့ စိတ်လှုပ်ရှားဖို့ကောင်းတဲ့အထိ မဆက်ဆံခဲ့ဖူးတာတော့သေချာ တယ်'
သူ....ကျွန်တော့်ကို ပြုံးကြည့်လိုက်ကာ မေးမြန်းပါရဲ့။ 'အိုကေ...ဘယ်သူနဲ့လုပ်ခဲ့တာလဲ?' ကျွန်တော်လည်း ပြန်ပြုံးပြလိုက်ကာ 'အိုကေ ပါ..ကျွန်တော်ပြောမှာပေါ့ ဦးရဲ ဘယ်သူနဲ့လုပ်ခဲ့တာလဲဆိုတာကို ပြောပြရင်လေ...ဦးရဲ အရင်ပြော....'
Alex Aung ( 10-2-2011)